လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: October 2015
ကလေးငယ်တစ်ဦး စပျစ်သီး လည်ပင်းထဲ ဆို့နင်ပြီး သေဆုံး
Friday, October 16, 2015 မှုခင်းသတင်း
ယူကေနိုင်ငံက အသက် ၂ နှစ်အရွယ် Jacob Jenkins အမည်ရှိ ကလေးငယ်ဟာ စပျစ်သီး စားနေရင်း စပျစ်သီးတလုံး လည်ပင်းထဲမှာ ဆို့နင်ပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိတ်ကာ သေဆုံး သွားပါတယ်...
Pizza Hut အမည်ရ စားသောက်ဆိုင် တခုမှာပါ... မိဘတွေက ပီဇာမှာယူပြီး စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်း ကလေးငယ်ဟာ စားပွဲပေါ်ရှိ စပျစ်သီးတွေကို စားနေစဉ် အခုလို ဖြစ်သွားတာပါ...
စားသောက်ဆိုင်ရှိ ဝန်ထမ်းတွေက ကြိုးစားပြီး ကူညီခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ပဲ... အရေးပေါ် လူနာ ယာဉ်တွေ ရောက်လာချိန်မှာတော့ ကလေးငယ်ရဲ့နှလုံးဟာ အလုပ်မလုပ်တော့ ပါဘူး... ဆေးရုံ ကိုရောက်ပြီး မကြာခင်မှာ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်...
သားဖြစ်သူ Jacob ဟာ မိခင်ဖြစ်သူ Abigail Wilson ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် Pizza Hut စားသောက်ဆိုင်ကို သွားချင်တယ်ဆိုတာကြောင့် မိဘ ၂ ပါးက လိုက်ပို့ပေးရင်း စားသောက်ဆိုင်မှာ အခုလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတာပါ...
ကလေးငယ်မိဘများ သတိပြုနိုင်ဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...။
Sunday, October 11, 2015 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
၉၆-ပါးထက် မကသော ဝေဒနာများစွာ ရှိကြသလို၊ သဘာဝ တရားကြီရဲ့ ဆုလာဘ်အဖြစ်
ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ နွယ်မြက်သစ်ပင်တွေ လည်း မိမိတို့ လက်တစ်ကမ်းမှာ
အဆင်သင့် ရှိနေကြပါတယ်။ သို့ သော် အကျိုးရှိရှိ မသုံးနိုင်ခြင်းက လွန်စွာမှ
နှမြော စရာကောင်း လှပါတယ်။ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေကို ဒုက္ခအပေးဆုံးနှင်
့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အများဆုံးရောဂါဟာ ဆီးချို (Diabetics) ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါဆိုတာ ဆီးထဲမှာ သကြားဓာတ် များလာသည့် ဆိုးရွားသော
ရောဂါတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုရောဂါ စွဲကပ်ပါက ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းအပြင် အနာရောဂါတို
့ပျောက်ကင်းဖို့ခဲယဉ်းသွားပါပြီ။
ဆေးသိပ္ပံနည်းအရ ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် စီမံဖော်စပ်ထားတဲ့
ဆီးချိုပျောက်ဆေးများဟာ၊ ဆီးချိုပမာဏကို ထိန်းထားနိုင်သော် လည်း
နာတာရှည် ဆီးချိုရောဂါရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေတဲ့ သာ
ဓကများစွာကို မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့ ကြားသိနေရပါတယ်။
သဘာဝတရားကြီးက ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ကြက်ဟင်းခါး၊ ကင်းပုန်သီး(အခါး)၊
ရှားစောင်းခါးသီး၊ ကြောင်လျာသီး၊ တောင် ဆီးဖြူသီး၊ ခံတက်ရွက်၊ တောကြက်မောက်၊
ပျားမြီးရွက်ပင်၊ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်၊ တရုတ်စံကားပင်၏ပင်စည်အခေါက်၊ ပြည်ပန်း
ညိုပင်၏ အရွက်/အခေါက်၊ နတ်ဆေးဂမုန်းပင်၊ ဗေဒါပန်းပွင့်၊ သပြေသီးအစေ့၊ ခ၀ဲ(ခါး)
သီး၊ ရုံးပတီသီး၊ ပဲနံ့ သာပင် ၊ မာလ ကာသီး ၊ သရက်ပင်အရွက်၊ ဥသျှစ်ရွက်၊
မိုးမခရွက်၊ သစ်ကြပိုးခေါက်မှုန့် ၊ ဘလူးဘယ်ရီသီး စတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့်
သစ်သီး ၀လံများကလည်း ဆီးချိုရောဂါအတွက် အသုံးတဲ့လှပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါကို မြန်မာဆေးဆရာတို့ က “မဓုမေလ ရောဂါ” ဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး၊
ရှေးပဝေသဏီကတည်းကစ၍ ထိုရောဂါကို ဆင်တုံးမနွယ်ပင်ဖြင့် အမြစ်ပြတ်အောင်
ကုသလာခဲ့ကြပါတယ်။ သို့ ပါ၍ ငွေလည်းမကုန်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းမရှိ အမှန် တကယ်
အမြစ်ပြတ် ပျောက်စေနိုင်တဲ့ " ဆင်တုံးမနွယ် " အပင်ကို သုံးကြည့်ဖို့ 
# ဦိးစွာ ပင်စည်လက်ခလယ်ခန့် တုတ်သော ဆင်တုံးမနွယ်(ရင့်ရင့်) အပင်ကို၊
တစ်တောင်ဆစ်ခန့် အရှည် လှီးဖြတ်ပါ။
# အရွက်တွေကိုဖယ်၍ ပင်စည်ကိုရေဆေးပါ။
# ရေခြောက်အောင်သုတ်ပြီးတဲ့အခါ မီးဖုတ်ပါ။ ၄င်းပင်စည်
အပေါ်ခွံကျွမ်းခါနီးအထိ မီးဖုတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
# အပေါ်က မီးကျွမ်းနေတဲ့အမဲများကို ခြစ်ထုတ်ပြီး၊ သန့် ရှင်းတဲ့
# ပြီးရင် ဆန်ဆေးရည် ၂ ပိဿာထဲ့ထားသော အ၀ကျယ်ကြွေဇလုံထဲမှာ
ဆင်တုံးမနွယ်ကို ထဲ့စိမ်ပေးပါ။ ဆန်ဆေးရည်
ထဲမှာ တစ်နေ့ နှင့်တစ်ည စိမ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
# ထိုဆေးရည်ကို ညစာမစားခင် ၁-နာရီခန့် ကြိုတင်၍
အချိုပန်းကန်လုံး(လ္ဘက်ရည်ပန်းကန်လုံး) တစ်လုံးဖြင့် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
(၁) ဆေးရည်သောက်ခါနီးတိုင်း အပေါ်ယံက အမြှုပ်များကို ကြွေဇွန်းဖြင့် ဖယ်ထုတ်ပါ။
သောက်ပြီးတိုင်း ဆန်ဆေးရည် တစ်ပန်း ကန် ပြန်ဖြည့်ပါ။ ထိုဆေးရည်ကို
တစ်လတိတိသုံးနိုင်ပါတယ်။ တစ်လပြည့်တဲ့အခါ ဆေးရည်အသစ်ပြန်စိမ်ပါ။
(၂) အရသာခါးသီးလွန်းတာကြောင့် ဆေးသောက်ပြီးတဲ့အခါ၊ ထန်းလျက် (သို့ မဟုတ်)
(၃) ဆေးရည်စိမ်တဲ့ခွက်၊ အမြှုပ်ခတ်ဇွန်း နှင့် ဆေးသောက်ခွက်တို့ ကို
ကြွေထည်ပစ္စည်း တစ်မျိုးတည်းသာသုံးပါ။ (ဓာတ် ဖောက်ပြန်အာနိသင် ပြယ်စေတတ်တဲ့
စတီးလ်၊ ဒန်၊ ငွေ စတဲ့ပစ္စည်းများကို လုံးဝ မသုံးပါနှင့်)
(၄) ဆီးကို ပုရွက်ဆိတ် မတက်တော့တဲ့အထိ ဇွဲရှိရှိသောက်ပါ။
(၅) ဆင်တုံးမနွယ်က ဆီးချိုပျောက်စေတဲ့အပြင်၊ အသားဝါရောဂါ၊ ၀မ်းကိုက်၊
ရင်ပြည့်ရင်ကယ်၊ အစာမကျေ၊ တီဘီ၊ မီးယပ် ဖြူဆင်းခြင်း စတဲ့ရောဂါများကို
ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူခြင်း နှင့်
မျက်စိမှုန်ခြင်းတို့ ကိုပါ ကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။
Sunday, October 11, 2015 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ရေခဲသေတ္တာဆိုတာ အစားအစာတွေကို လတ်ဆတ်စေဖို့ ၊ မပုပ်မသိုးစေဘဲ တာရှည်ခံဖို
့၊ ကျမ္မာရေးနဲ့ညီညွတ်စေဖို့ ဆိုပြီး အပူ ချိန်လျော့ချ၍
အအေးခံ သိမ်းဆည်း ထားတဲ့ နေရာလေးဖြစ်တာမို့ဇိမ်ခံပစ္စည်း မဟုတ်ဘဲ၊
အိမ်တစ်အိမ် အတွက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်း တစ်ခုလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်မများအတွက် သက်မဲ့ အတွင်းရေးမှူး (လက်ထောက်)ဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သို
့သော် သဘာဝ နဲ့ ဆန့် ကျင်ပြီး အပူချိန်လျော့ချကာ အအေးခံပေး ထားတာဖြစ်လို
့၊ အစားအစာ (အားလုံး) ကိုတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထဲ့သိမ်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။
အချို့ အစားအစာတွေကို အေးခဲ ထားလိုက်တဲ့အခါ မူလအနံ့ အရသာကို
ပျက်ပြယ် သွားစေတဲ့အပြင်၊ အချိန်မ တိုင်ခင်
အာလူးတွေက အလင်းသိပ်မကြိုက်ကြပါဘူး။ ခြောက်သွေ့ တဲ့နေရာနဲ
့သဘာဝအခန်းအပူချိန်ကိုသာ ကြိုက်ကြပါတယ်။ အကယ် ၍ အာလူးကို ရေခဲသေတ္တာထဲ
ထည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ သူ့ ရဲ့ မူလအရသာများ ပျက်စီးသွားပါတော့တယ်။ ဒါ့ပြင်
ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ တော်တော်နဲ့ မနူးအိလာတော့ဘဲ၊ စားတဲ့အခါမှာ
မာဆတ်ဆတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အာလူးအခွံပေါ်မှာ အစိမ်းရောင်သန်းနေရင်
(လုံးဝ)မ၀ယ်ပါနဲ့ ။ အဆိပ်ဖြစ်စေတတ်လို့ ပါ။ (ထို့ နည်းတူစွာပင် ပိန်းဥ၊
ကန်စွန်းဥတွေကိုလဲ ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းမထားသင့် ပါဘူး)
ကြက်သွန်နီတွေကို ပုံမှန်အခန်းအပူချိန်ထဲမှာ သာထားပေးရပါမယ်။
ကြက်သွန်နီတွေ ကြာကြာခံစေဖို့ အတွက် ဇာကွက်/ပိုက်ကွန် အိတ်တွေက
အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအချက်က ကြက်သွန်နီတွေ နဲ့ 
အာလူးတွေကို တူတူရော မထားသင့် ပါဘူး။ ကြက်သွန်ထဲမှာပါတဲ့
သဘာဝဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်ရနံ့ တွေကို အာလူးက စုပ်ယူပစ်လို့ ပါ။ ဒါ့ပြင်
ကြက်သွန်နဲ့ အာလူး များအားလုံး တခဏတွင်းမှာပင် ပုပ်သွားစေပါတယ်။
(ကြက်သွန်နီတွေကို တနေ့ တာချက်ပြုတ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်သလောက် သာ
အခွံနွှာပါ။ အကယ်၍ အခွံနွှာ ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီးတော့မှ ပိုလျှံ၍ နောက်နေ့ မှ
သုံးတဲ့အခါ အစာအိမ်ကို အဆိပ်ပြုစေပြီး အော့အန် စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို
ပြဿနာမဖြစ်ရလေအောင် အခွံနွှာပြီးသား ပိုလျှံနေတဲ့ကြက်သွန်နီတွေကို
အပူပေးဆီသတ်၍ အအေးခံပြီး နောက် ဗူးထဲမှာရေလုံအောင်ဖုံးပြီးမှသာ
ရေခဲသေတ္တာထဲ ထဲ့သိမ်းပေးပါ။ ဗူးလေလုံဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ လေမလုံပါက ရေခဲ
သေတ္တာ တခုလုံးအနံ့ ဆိုးထွက်ပြီး၊ အထဲရှိ တခြားပစ္စည်းများအားလုံးကို အနံ
ကြက်သွန်အဖြူတွေကိုလည်း ကြက်သွန်နီတွေလိုဘဲ၊ ဇာကွက်/ပိုက်ကွန်
အိတ်တွေထဲထဲ့ပြီး အခန်းအပူချိန်မှာသာ သိမ်းထား သင့်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်မတိုင်းလိုလို က ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းထားမှ
ကြာကြာခံတယ်လို့ ထင်မှတ်မှားနေကြပါတယ်။ အဲဒီလို သိမ်းထားခြင်းက
ခရမ်းချဉ်သီးရဲ့ အနံ့ အရသာတွေ (အားလုံး)ပျက်ယွင်းသွားစေလို
့အင်မတန်မှားယွင်းတဲ့ အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့
ပုံမှန်အခန်းအပူချိန်မှာသာ သိမ်းထားရပါ မယ်။ (အကယ်၍ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကို
မြန်မြန်မှည့်စေချင်ရင်၊ စက္ကူအိတ်မှာ သိမ်းပေးပါ)
ရခိုင်၊ ဖီကြမ်း၊ သီးမွှေး၊ ရွှေဌက်ပျော စတဲ့ ဌက်ပျောသီး
ဘယ်အမျိုး အစားတွေကိုမဆို ရေခဲသေတ္တာထဲ (လုံးဝ) သိမ်းမထားသင့်ပါ ဘူး။
အဲဒီလို သိမ်းထားလိုက်တဲ့အခါ၊ မကြာမီအတွင်းမှာပင်
ဌက်ပျောသီးကို အအေးရိုက်၍ ဌက်ပျောခွံတွေမည်းတက်လာပြီး၊ အနံ့ အရသာ၊
ကျမ္မာရေးဂုဏ်သတ္တိတွေ အားလုံးဓာတ်ပြယ်သွားစေပါတယ်။ ဌက်ပျောသီးရဲ
့သဘောတရားက မကြာခဏထိကိုင် မိတဲ့အခါ အပူလောင်ပြီး ပျော့လာတတ်တာမို့ ၊
ဌက်ပျော်သီးအခိုင်တွဲကို အလယ်ကနေ ကြိုးခွချည်ပြီး တိုင်မှာချိတ်ထားပေးပါ။
ဌက်ပျောသီးရဲ့ အညှာကို ပလပ်စတစ်အစနဲ့တုပ်ချည်ပေးခြင်းက နောက်ထပ်
၄-ရက်(သို့ )၅-ရက်လောက် အထားခံပါတယ်။ (ဌက်ပျောခွံပေါ်မှာ
အမည်းအစက်အပြောက်ပါတဲ့ အသီးတွေက အပင်ပေါ်မှာ ကြာကြာရင့်မှည့်လာတာမို့ 
အရသာပို ကောင်းပြီး ဆေးစွမ်းပိုထက်ပါတယ်)
သခွားသီးကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားလို့ တော့ရပါတယ် ဒါပေမယ့်
လှီးလက်စသခွားသီး အပိုင်းအစကို ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းမိတဲ့အခါမှာ
ထင်သလောက်တာရှည် မခံတော့ပါဘူး။ သခွားသီး တစ်လုံးကို တစ်ခါထည်းကုန်အောင်
မသုံးဖြစ်သေးပါက ထက်ခြမ်းမခွဲပါနှင့်။ ခါးလယ်ကဖြစ်စေ၊
သင့်တော်ရာနေရာကဖြစ်စေ လိုသလောက်ဓားနဲ့ ဖြတ်တောက်ပါ။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကို
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သုံးနိုင်ဖို့ အတွက် ရေအနည်းငယ်ထဲ့ထားသော ပန်းကန်လုံးထဲမှာ
ဓားနဲ့ ဖြတ်ပြီးတဲ့အပိုင်းကို အောက် ကထား၍ ထောင်ထားပေးပါ။
ရက်ကြာရှည်စွာ သံပုရာသီးတွေ မပုပ်အောင် ထားလို့ ရပါတယ်။
ပန်းကန်ပြား ပက်ပက်ထဲမှာ သံပုရာသီးများကိုထဲ့ပြီး ဖန်ခွက်နဲ့အုပ်ထားပါ။
အသီးတွေကို အသုံးမလိုခင် ဖန်ခွက်ကို(လုံးဝ)မဖွင့်ပါနဲ့ ။ ဖွင့်မိတဲ့အခါ
သံပုရာသီးများကို လေသလပ်သွားတာ ကြောင့် ပုပ်သွားတတ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အောင်မြင်မှုရစေတဲ့ သော့ချက်တစ်ချို့
တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတိုင်းလိုလို လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းမှာ မတူညီတဲ့ပြိုင် ဆိုင်မှုတွေနဲ့၊ ခက်ခဲကျပ်တည်းရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ အခါမျိုးရှိကြပါတယ်။ ဒီလို အတွေ့အကြုံမျိုးတွေဟာ အများအားဖြင့် ထိပ်တန်း တစ်နေရာကို ရရှိဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ လူတွေအတွက် စိန်ခေါ်မှု တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အောင်မြင်မှုကို ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ လူတွေအတွက် ဘယ်လိုစိန်ခေါ် မှုတွေဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့သော့ ချက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ အောင်မြင် တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကို ကြိုးပမ်းနိုင်ဖို့လိုပါသလဲ။ ဒီအတွက် ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေများစွာရှိရာ လက်လှမ်းမှီသလောက် သော့ချက်တစ်ချို့ကို ဝေမျဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ ခိုင်မာတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိစေဖို့ မိမိရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေအပေါ် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ထားရှိတတ်ဖို့လိုပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာ အပေါင်းအစုနဲ့ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ရတာကြောင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ရဲဖော်ရဲဘက်စိတ်အပြည့်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှ ရေရှည်အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်လေးကိုမွေးမြူပြီး မိမိရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေအတွက် မှန်ကန်စွာရပ်တည်ပေးနိုင်မှုဟာ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတစ်ခုကို မွေးဖွားစေပါတယ်။ မိမိကိုယ်မိမိ လိပ်ပြာသန့်ပြီး ဘဝကိုရှေ့ဆက်ဖို့ ယုံကြည်မှုအားတိုးစေပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပြဿနာရပ်တွေ၊ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဆိုတာ အမြဲလိုလို ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေအတွက် မိမိရဲ့မှတ်ချက်အရေးပါသူတွေအနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့မှတ်ချက်တွေပေးတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အထက်လူကြီးမှ လက်အောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိဆီမှ ထောက်ခံချက် တစ်စုံတစ်ရာတောင်းဆိုလာတဲ့အချိန်မှာ မိမိရဲ့ထောက်ခံချက်ဟာ ထိုဝန်ထမ်းအတွက် အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ထောက်ခံချက်တစ်စုံတစ်ခုဟာ တစ်ဘက်သားအတွက် အရမ်းကို အရေးပါလှတာကြောင့် ထောက်ခံချက်ပေးရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားရှိနေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်၊ လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ် မှန်ကန်စွာ မြင်တတ်တဲ့အမြင်မျိုးရှိနေဖို့လိုပါတယ်။တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ဖိအားကြောင့် မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းအပေါ် လွဲမှားစွာ ထောက်ခံချက်ပေးမှုဟာ ထိုသူရဲ့ဘဝကိုများစွာထိခိုက်နစ်နာစေသလို အောင်မြင်မှု ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ မိမိရဲ့စိတ်အင်အားကိုလည်း များစွာယုတ်လျော့စေပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ မတူညီတဲ့အမြင်အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြရာ ထိုမတူညီတဲ့အမြင်တွေကြားမှာ မိမိရဲ့အခက်အခဲတွေအတွက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။ လိမ္မာပါးနပ်မှုဆိုတာ အရမ်းကို အရေးပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ လိမ္မာပါးနပ်မှုဆိုတာ လိမ်လည်လှည့်ဖျားတာမျိုး ၊လူလည်ကျတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မိမိရဲ့ပြဿနာရပ်တွေကို ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ဖြေရှင်းခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဇောတွေကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ထားပြီး ငြိမ်သက်တဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုရယူပြီးမှ လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံကြား သံတမန်ရေးရာ မရှိမဖြစ်အရေးပါနေမှုဟာ လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဖြေရှင်းနည်းရဲ့ထိရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို Diplomacy ဆိုလို့အကြမ်းဖျင်းနားလည်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာလည်း အောင်မြင်မှုကို ကြိုးပမ်းနေသူတွေအတွက် Diplomacy ဆိုတာ အရမ်းကို လိုအပ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အရာရာတိုင်းကို တွန့်ဆုတ်ကြောက်ရွံနေမှုဟာ မိမိကိုယ်ကို မိမိ နောက်လိုက်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့နေသလိုဖြစ်စေပါတယ်။ မိမိအတွက်ချမှတ်ရမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ကြောက်ရွံနေပြီး မဝံ့မရဲဖြစ်နေခြင်းဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအားကိုနည်းစေပြီး မိမိကိုယ်မိမိလည်း စိတ်အားလျော့စေပါတယ်။လောကမှာ အမှားဆိုတာ အမြဲတစ်စေကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပြီး အမှားအတွက် တွေးပူပြီး ကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုဘဲ မိမိလုပ်သင့်ဆုံးဖြတ်သင့်တဲ့အရာတွေကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဟာ အောင်မြင်မှုလင်းလက်စေတဲ့ရောင်ခြည်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေဟာ အမှားတွေ ကနေ အမှန်တွေကို သင်ယူနေရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတွေက မသင်ယူဘဲဆက်လက် မှားနေသူတွေကသာ ဘဝမှာ ဆုံးရှုံးနစ်နာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
မိမိလုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူတတ်မှုဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကိုပါအကျိုးပြုသလို မိမိကိုယ်တိုင်ကိုလည်း အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ခြေတစ်လှမ်းတိုးစေခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့အလုပ်ကို စေတနာထားပြီး လုပ်ဆောင်ခြင်းဟ မိမိရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဒီလို လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့လူတွေကို အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းက လှိုက်လှဲစွာ လက်ကမ်းကြိုဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်။ မိမိလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာဟူသမျဟာ မိမိရဲ့နောက်က အရိပ်ပမာလိုက်နေရာ မိမိရဲ့ကောင်းမွန်စွာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့မှုမှန်သမျဟာ မိမိရဲ့နောက်မှာ အရိပ်ပမာထပ်ကြပ်မကွာလိုက်နေမှာဖြစ်တာကြောင့် အလုပ်ကိုစေတနာပါပါလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အရိပ်ကောင်းကို ဖန်တီးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
Photography by: Google Search
လူတိုင်းဟာ အနာဂတ်ကို သိခွင့်ရမယ်ဆို သိချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဗေဒင်မေးခြင်း၊ လက္ခဏာကြည့်ခြင်း၊ ရှေ့ဖြစ်ဟောခြင်း စတာတွေဟာ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ခေတ်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တိုင်းမှာသာမက အနောက်တိုင်းမှာလည်း ဗေဒင်ပညာကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ။ အရှေ့တိုင်းမှာလိုပဲ အနောက်တိုင်းမှာလည်း သတင်းစာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်းတွေ နေ့စဉ်လစဉ် ထည့်ကြပါတယ်။ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းက ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ပဲရစ်မြို့တစ်မြို့တည်းမှာတင် ဗေဒင်ပညာရှင်ပေါင်း ခြောက်သောင်းခန့်ရှိတယ်လို့ ဖတ်ရဖူးပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ ရေဂင်နဲ့ သူ့ဇနီး ဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မချခင်မှာ အမျိုးသမီးဗေဒင်ပညာရှင်တစ်ဦးနဲ့ အမြဲပုံမှန် ဆွေးနွေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗေဒင်ဟောခြင်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူတွေအများကြီးရှိကြပေမဲ့ တကယ်ပညာရှင်အစစ်ကတော့ အမြဲလိုလို မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ ဗေဒင်ပညာရှင်စစ်စစ် ဆိုတာ ဗေဒင်ပညာရပ်ကိုပိုင်နိုင်သူလည်း ဖြစ်နိုင်သလို မွေးရာပါဆဌမအာရုံကြောင့် ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်ကို မြင်ရသူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပညာရှင်အစစ် ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ မိမ် ဗေဒင်မေးကြည့်ရုံနဲ့ မကြာခင်မှာပဲ သိနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ အတိတ်ကို အနီးစပ်ဆုံး မှန်ကန်အောင်ဟောနိုင်မှသာ မိမိရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်း ဟောနိုင်မယ်မဟုတ်ပါလား။ အတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေကို ဟောတာမမှန်ရင်တော့ ဒါဟာ ပညာရှင်အတုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗေဒင်ပညာကို ယုံကြည်ပြီး ပညာရှင်ကောင်းနဲ့ တွေ့ပြီး ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေကိုအောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သူတွေရှိသလို အယောင်ဆောင် ပညာရှင်ရဲ့ အလိမ်အညာကိုခံရပြီး ငွေကြေးများစွာဆုံးရှုံးရသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
ဗေဒင်ဟောနည်းပေါင်းများစွာရှိပြီး လက္ခဏာကြည့်ဟောခြင်း၊ မွေးသက္ကရာဇ်ကိုတွက်ချက်ခြင်း၊ တဲရော့ဗေဒင် ဟောခြင်း၊ ဖန်လုံးကြည့်ဟောခြင်း၊ ဖဲချပ်များဖြင့်ဟောခြင်း စသဖြင့် အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဟောသည်ဖြစ်စေ စစ်မှန်တဲ့ပညာရှင်ကဟောမှသာ အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဒင်မေးခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ အတွက် ဗေဒင်မေးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးများကို လေ့လာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရခြင်း - ဗေဒင်ပညာရှင်ရဲ့ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်မှုတွေကို သိရှိထားတဲ့ အခါ လိုအပ်တာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတာဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် လည်း ကြိုတင်ရှောင်လွှဲနိုင်သလို ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ မိမိအနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာခြင်း - မှန်ကန်တိကျတဲ့ ဟောကိန်း တွေကို ဟောနိုင်တဲ့ ဗေဒင်ပညာရှင်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အစွမ်းအစတွေကိုပါ ဖော်ထုတ်ဟော ကြားနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ရှေ့ဆက်လုပ်သင့်တာတွေကို သေချာအစီအစဉ်ချနိုင်ပါတယ်။
နေ့ရက်တိုင်းမှာ အကျိုးရှိခြင်း - “သင်ဟာ အခွင့်အလမ်းတွေကို အမိအရဆုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ကြီးပွားအောင်မြင်မယ်” ဆိုတဲ့ ဟောကိန်းလေးတစ်ခုဟာ မနက်တိုင်း မနက်တိုင်းမှာ ကြားယောင်ပြီး နေ့သစ်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းဖို့ အားအင်တွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းကိုဟောတဲ့ဟောကိန်းတစ်ခုဟာ နေ့ စဉ်နေ့တိုင်းမှာ ခွန်အားတွေပေးနိုင်ပါတယ်။
လှည့်စားခံရနိုင်ခြင်း - အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေဆိုတာ အနာဂတ်မှာ အမြဲ ရှိနေမှာပါပဲ။ လည်ဝယ်ပါးနပ်တဲ့ အတုအယောင်ဗေဒင်ဆရာတွေဟာ အနာဂတ်ကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ် အောင် ဟောကိန်း ထုတ်တတ်ပါတယ်။ တချို့က အထူးအောင်မြင်ကိန်းရှိတယ်ဆိုပြီး ယတြာချေခိုင်း၊ ပူဇော်ပသခိုင်းတာရှိသလို တချို့ကလည်း ဒုက္ခရောက်ကိန်းမြင်တယ်ဆိုပြီး ယတြာချေခိုင်း၊ ပူဇော်ပသခိုင်းတာလည်း ရှိပါတယ်။
အချိန်ဖြုန်းမိခြင်း - ဗေဒင်နဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဟောကိန်းတွေကို အလွန်အကျွံယုံကြည်ခြင်း၊ လိုက်စားခြင်းဟာ အချိန်နဲ့ငွေကို ဖြုန်းတီးရာရောက်ပါတယ်။ အချိန်မီလုပ်လိုက်သင့်တာတစ်ခု ကို ဗေဒင်မတွက်ရသေးလို့ ယတြာမချေရသေးလို့ မလုပ်လိုက်တာမျိုးတောင် ရှိတတ်ကြတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
အားကိုးလွန်းခြင်း - မိမိရဲ့ အနာဂတ်ကို မိမိဘာသာဖန်တီးရမှာကို မေ့လျော့ပြီး အရာရာ ဗေဒင်ပညာရှင်ကို အားကိုးခြင်းဟာ အစွမ်းအစကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
ဗေဒင်ပညာကို ယုံသူလည်း ရှိသလို မယုံသူလည်းရှိပါတယ်။ အလွန်အမင်းကိုးကွယ်သူတွေရှိသလိုပဲ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့သူလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗေဒင်ပညာရပ်ဆိုတာ ခိုင်ခိုင်မာမာအမြဲရှိနေတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဗေဒင်ပညာကို ယုံကြည်လက်ခံသူတွေအနေနဲ့ မိမိဘ၀အတွက် မကောင်းတာရှောင် ကောင်းတာဆောင်ဖို့ ဗေဒင်ပညာကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အသုံးပြုရင်း “အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော” ဆိုတဲ့ ဘုရားဟောတရားတော်လိုပဲ မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာလို့ ယုံကြည်သင့်ပါကြောင်း ဆွေးနွေး လိုက်ပါတယ်။
Sunday, October 11, 2015 အသက် (၁၈)နှစ်အထက် ဖတ်စာများ
“လောလော ဆယ်တော့ လူတစ်ကိုယ်လုံးပုံစံ လေမှုတ်ရုပ်ပဲ ရှိတယ် အစ်ကို။ ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်သိန်း ရှစ်သောင်းပါ။ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ လူအစစ်လို အရုပ်မျိုး လိုချင်ရင်တော့ ဈေးကြီးမယ်။ ဟိုကို လှမ်းမှာမှ ရမယ်”
ရန်ကုန်မြို့ရှိ နာမည်ကျော် ဖက်ရှင်စတိုးဆိုင် တစ်ခု၏ နောက်ပိုင်း အခန်းလေးတစ်ခု အတွင်းမှ ကစားစရာ အရုပ် ရောင်းချနေသည့် မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြနေသော အသက်၂၅ ဝန်းကျင် စတိုးဆိုင် အရောင်းဝန်ထမ်း လူငယ်လေး ရှေ့တွင် ထုတ်ပြသည့် ကစားစရာ အရုပ်များကို ကိုင်တွယ် ကြည့်ရှုနေကြသူများ ကတော့ အရုပ်ဖြင့် ဆော့ကစား သည့် ကလေးငယ် အရွယ်များ မဟုတ်။ အသက်(၃၀)အရွယ် လူလတ်ပိုင်း နှစ်ဦးသာ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါလူလတ်ပိုင်းအရွယ် နှစ်ဦး လာရောက်ဝယ်ယူနေသည်မှာ ယခုနောက်ပိုင်း မြို့ပြနေ လူတန်းစား အကြား တွင်ကျယ်စပြုနေပြီ ဖြစ်သည့် Sex Toy (ခေါ်) လူကြီးကစားစရာ အရုပ်များပင် ဖြစ်သည်။ ထိုလူကြီး ကစားစရာ များမှာ လူကြီးများကို လိင်ဖျော်ဖြေရာတွင် အသုံးပြုသော ခေတ်သစ်ဇိမ်ခံမယ်၊ အပျော်မယ်ဟု ဆိုလျှင်လည်း မမှားနိုင်ပေ။
မြို့ပြ ရပ်ဝန်းသည် လူဦးရေသိပ်သည်းဆ နှင့်အတူ စားရေးသောက်ရေး မှအစ အခြေခံကျသည့် နေရေး ထိုင်ရေး အဆုံး အကျပ်အတည်းများစွာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လူငယ်လူရွယ်တို့၏ ဝန်းကျင်တွင် အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းကို အခက်အခဲကြီး တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်လာကြပြီး လိင်မှုရေးရာ ကိစ္စအတွက် အလွယ်နည်းလမ်း များဖြင့် ဖြေဖျောက်မှုများ ရှိလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းများ အနက်မှ Sex Toy ဟု ခေါ်သော လူကြီးကစားစရာများဖြင့် စိတ်ဆန္ဒ ဖြေဖျောက်ခြင်း မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ယခင်က အမျိုးသား အင်္ဂါအတုများ၊ အမျိုးသမီး အင်္ဂါအတုများကို ရန်ကုန်မြို့လယ်၊ ပလက်ဖောင်းဘေးရှိ ကာမဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများရောင်းချသည့် ဆိုင်လေးများတွင် လက်သိပ်ထိုး မှာယူရသည့် ဈေးကွက် ရှိခဲ့ဖူး သည်။
ယခုအခါတွင်တော့ ပိုမို အဆင့်မြင့်မားသည့် Sex Toy များကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ဖက်ရှင်ဆိုင်အချို့၏ သီးသန့်ခန်းများအတွင်း သီးသန့် ဈေးဝယ်သူများအား ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ပေးနေပြီဟု ပြောဆိုလာသူက ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နေ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်သူ ကိုဇော်ဇော်လှိုင် ဖြစ်သည်။
“သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ခေါ်သွားလို့ အဲဒါတွေ ရောင်းတဲ့ စတိုင်းဆိုင်ကို ရောက်ဖူးတာ။ အကြောင်း သိတွေချင်း အချက်ပြမှ ဆိုင်က နောက်ဘက်ထောင့်ချိုးမှာ ရှိတဲ့ အခန်းတစ်ခုကို ခေါ်သွားပြီး ထုတ်ပြတာ.. ပစ္စည်း ပုံစံတွေကတော့ မျိုးစုံပဲ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဆိုင်အတွင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသည့် အမျိုးသားအင်္ဂါအတုများ၊ တုန်ခါစက်များ၊ လျှာတုများ အပြင် အမျိုးသားများ အသုံးပြုသည့် အမျိုးသမီးအင်္ဂါ အတုများ၊ လေမှုတ်ရုပ်များ၊ အသံထွက်သည့် အမျိုးသမီး ပုံစံငယ် ရာဘာအရုပ်မများ အစရှိသည့် နိုင်ငံစုံ၊ အမှတ်တံဆိပ်အစုံ လူကြီးကစားစရာများကို တွေ့ ရကြောင်းလည်း ကိုဇော်ဇော်လှိုင်က ဖြည့်စွက်သည်။
အဆိုပါ Sex Toy များမှာ မြန်မာငွေ ကျပ်သုံးသောင်းမှ အများဆုံး လေးသိန်းကျော်အထိ ရှိပြီး အမျိုးသားသုံး ပစ္စည်းများမှာ အမျိုးသမီးသုံးများထက် ပိုမိုရှားပါးကာ ဈေးနှုန်း မြင့်မားကြောင်းလည်း အွန်လိုင်းတွင် လူကြီးကစားစရာစတိုး အမည်ဖြင့် Sex Toy များ ရောင်းချနေသော ကိုထက် (အမည်လွှဲ) က ဆိုသည်။
Sex Toy များမှာ ပြင်ပစတိုးဆိုင်များတွင် လက်သိပ်ထိုး ရောင်းချသည်များ ရှိသကဲ့သို့ ကိုထက်တို့ကဲ့သို့ အွန်လိုင်းရှော့ပင်း များတွင် ရောင်းချရာမှလည်း ယခုအခါ လူကြိုက်များလာပြီ ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းမှ မှာယူသူများမှာ ယခင်က လိင်တူချစ်သူများ၊ အမျိုးသားများသာ ရှိရာမှ ယခုအခါ အမျိုး သမီး အများစုပင် ရှိလာပြီဟု ကိုထက်က ဆိုသည်။ Sex Toy များကို ယခင်က ထိုင်းနယ်စပ်၊ တရုတ် နိုင်ငံနယ်စပ် လမ်းကြောင်းတို့မှ ကာမစိတ်ကြွဆေး တင်သွင်းသူတို့ထံမှ မှာယူခဲ့ရပြီး ယခုအခါ Sex Toy များကိုသာ သီးသန့် မှာယူလာနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကိုထက်ထံမှ သိရသည်။
Sex Toy များမှာ ယခုမှသာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ သမိုင်းဦးခေတ် ကပင် စတင် ပေါ်ပေါက် လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း http://www.alternet.org/sex-amp-relationships/sex-toy အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယခုအခါ Sex Toy များမှာ အဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာပြီး ယခုအခါဂျပန်နိုင်ငံထုတ် အမျိုးသမီး ပုံစံငယ် Sex Toy များမှာ လူသားတစ်ယောက်အလား အထိအတွေ့နှင့် အသံများကိုပင် တုပ ပြုလုပ်နိုင်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း အင်တာနက် သတင်းများတွင် တွေ့ရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ လိင်ကိစ္စအတွက် သုံးပြုသည့် လူကြီးကစားစရာ ဈေးကွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေပန်း စားစ ပြုလာခြင်း အပေါ် အမြင်များကလည်း အမျိုးမျိုး အထွေထွေပင်။
လက်မထပ်ဘဲ အတူနေထိုင်ခြင်းများ၊ ပြည့်တန်ဆာများနှင့် အပျော်အပါး လိုက်စားခြင်းများ ထက်စာလျှင် ကိုယ့်ဘာသာ ကစားစရာနှင့် ဖြေဖျောက်ခြင်းက အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု ဆိုလာသူက အလုံမြို့နယ်နေ အသက်(၃၅) နှစ်အရွယ် နက်ဝပ်အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုအောင်အောင် ဖြစ်သည်။
“ဒါတွေဟာ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်ပြီး ကလေးတွေ အတုခိုးလာတာပဲ။ သဘာဝနဲ့က ဖီလာ ဆန့်ကျင်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ အတုမြင် အတတ်သင်ပြီး ဖြစ်လာတာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ယဉ်ကျေးမှုအရ လုံးဝ တားမြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု အသက်(၅၀)အရွယ် အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သူ ဦးစောဦးက တစ်မျိုးဆိုပြန်သည်။
“မာစတာဘေးရှင်း လုပ်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ဖြေဖျောက်မှု လုပ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝတရား တစ်ခု ပဲ။ ဆေးပညာအရလည်း ဒါကို မူမမှန်တဲ့ကိစ္စလို့ မသတ်မှတ်ထားဘူး။ ဒါပေမဲ့ စက်နဲ့ ဖြေဖျောက်တယ် ဆိုတာက သဘာဝမကျဘူး။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ထင်တယ်။ သေချာ သုတေ သနပြုချက်တွေ မရှိသေ ပေမယ့် အရမ်းကြီး အားမပေးချင်ဘူး” ဟု မီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ် သူ ဒေါက်တာအောင်မြင့်က ဆိုသည်။
Sex Toy များ မှာ ပလပ်စတစ်၊ ဆီလီကွန်၊ ရာဘာ၊ ဗီနိုင်းလ်(Vinyl) လေးတက်စ်(Latex) စသည် တို့နှင့် ပြုလုပ် ထားလေ့ရှိပြီး ခင်ပွန်းသည် ဇနီး သည်နှင့် ဆက်ဆံသည့်အခါ ပြောင်းပြန် အကျိုး သက် ရောက် မှုများ၊ ဆီးလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ပြ သနာများ ဖြစ်ပွား လာနိုင်ခြေ ရှိကြောင်း ၎င်း ကဖြည့်စွက်သည်။
နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေး စစ်တမ်းများအရမူ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တစ်ဦးသည် လက်နှင့်ဖြစ်စေ၊ စက်နှင့်ဖြစ်စေ စိတ်ဆန္ဒ ဖြေဖျောက်ခြင်းသည် စိတ်ကျန်းမာရေး ကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ဖွယ် မရှိကြောင်း ဆိုကြပြန်သည်။
အဆိုပါ Sex Toy များ အသုံးပြုမှု ရေပန်းစားလာခြင်းနှင့် ဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာမှု အပေါ် ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်မှ အမြင်ကွဲပြားမှုများ ရှိနေသကဲ့သို့ အဆိုပါ ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချခွင့် ရှိမရှိ နှင့် သုံးစွဲသူတို့ အနေဖြင့် မည့်သို့သော ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းမှု ရှိမရှိကိုလည်း အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေပြန်သည်။
“ပုဒ်မ ၃၇၇ မှာ ဓမ္မတာမဟုတ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း တွေကို အရေးယူနိုင်တယ်လို့ ပါပြီးသားပဲ... ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ရင် ရာဇဝတ်မှု မြောက်တယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ အလုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် အဆင့်ရှိ အမှုစစ်ရဲ အရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“လက်ရှိဥပဒေအရ တစ်ပါးသူကို ထိခိုက်စေမယ့် မူမမှန်သော လိင်ဆက်ဆံမှုမျိုး ဆိုရင် ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ ငြိတယ်။ သို့သော် မိမိဘာသာ အာသာဖြေဖျောက်တဲ့ ကိစ္စ၊ မည်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘူး ဆိုရင်တော့ ပြစ်မှု မမြောက်ဘူး။ အရေးမယူနိုင်ဘူး” ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးအောင်ငွေစိုးက ဆိုသည်။
“၂၀၁၀ တုန်းက ယုဇနပလာဇာ နားက ဂိုထောင်တစ်ခုကို ဝင်ဖမ်းဖူးတယ်။ ကာမစိတ်ကြွ ဆေးဝါးတွေနဲ့ Sex Toy တွေ အများကြီး ဖမ်းမိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးဝါးတွေကိုပဲ ဆေးဝါးအက် (၂၆)နဲ့ အရေးယူနိုင်ပြီး Sex Toy တွေကိုကျ ဘာပုဒ်မနဲ့မှ အရေးယူလို့ မရပါဘူး” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ ဒုရဲအုပ်အောင်အောင်က ဆိုသည်။
လူငယ်ထုအကြား ရေပန်းစားလာသည့် Sex Toy များ အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ လူကြီးကစားစရာ ဈေးကွက် ကား တဖြည်းဖြည်း တွင်ကျယ်လာနေပြီ ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးရှုထောင့်၊ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်၊ ဥပဒေ ရှုထောင့်တို့မှ လူကြီးကစားစရာများ ခေတ်စားလာမှုအပေါ် ဝိဝါဒ ကွဲပြားမှုများ ရှိနေသော်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အနှံအပြားတွင်မူ Sex Toy သီးသန့် စတိုးဆိုင်များကား ဆယ်စု နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်း က ပေါ်ပေါက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု နှင့်အတူ ဖွင့်လိုက်သော တံခါးမှ ဝင်လာသောအရာများတွင် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုး ဒွိဟဖြစ်စေသော ယဉ်ကျေးမှုများစွာ ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုး ခွဲခြားပေးရန် အတွက် မိမိ၏ ပင်ကိုယ်အသိဉာဏ်နှင့် ခွဲခြား စိတ်ဖြာရမည်သာ ဖြစ်သည်။
လူကြီးတို့အတွက် ဆော့ကစား ချင်စရာ Sex Toy ခေါ် လူကြီးကစားစရာ အသစ်အဆန်းလေးများ ကတော့ ဈေးကွက်အတွင်း အမျိုးစုံ ကြိုးခုန်လျက် စောင့်ကြိုနေလေပြီ။
See more at: http://thevoicemyanmar.com/index.php/society/item/8428-kst#sthash.XzgId1Px.dpuf
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ပြောသော သင့်ကျန်းမာရေး
by မိုရ်မိုရ် (YUFL)
ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းက စိုပြည်နုပျိုတဲ့ ရုပ်ရည်ကို ဖော်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သင်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊ အရေးအကြောင်း ဖြစ်တာ စတာတွေကို အသက်ရလာလို့၊ စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ ဖြစ်တာလို့ ထင်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက အမြဲတမ်း အတွက်တော့ မမှန်ကန်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်က သင်မသိတဲ့ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်နေနိုင်လို့ ပါပဲ။
၁။ ခြေဖ၀ါးတွေ၊ ခြေဖမိုးတွေ ခါတိုင်းထက် ရောင်ကိုင်းနေပါသလား။ ခြေထောက် အကြောလွဲခြင်း၊ ခိုက်မိခြင်း၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ပိုးမွှားဝင်ခြင်း စတဲ့ အခြေအနေတွေက ခြေထောက်တွေကို ရောင်ကိုင်း စေနိုင် ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားခြင်း၊ အ၀လွန်ခြင်းတွေကလည်း ခြေဖမိုးတွေကို ရောင်ကိုင်း စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာက နှလုံး အလုပ်လုပ်ပုံ မမှန်လို့ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင် ပါသေးတယ်။
၂။ မျက်လုံးတွေက အရမ်းပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေပုံ ပေါ်နေပါသလား။ မျက်ကွင်းညိုခြင်း၊ မျက်အိတ်ဖြစ်ခြင်းတို့က အိပ်ရေးပျက်တာများလို့လည်း ဖြစ်နိုင်သလို စားသောက်ပုံကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ သင်စားတဲ့ အစားအစာတွေမှာ ဆားအများအပြား ထည့်စားသုံးနေမိခြင်းက ဤလက္ခဏာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၃။ အသားအရေတွေ အလွန်အမင်း ခြောက်သွေ့ နေပါသလား။ ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေခြောက်တာက သဘာဝ ဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်း လိုလို အသားအရေက သာမန်ထက် ပိုပြီး ခြောက်သွေ့နေမယ် ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး သွေးကြောကျဉ်းတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ သုတေသနပြုချက် တစ်ခုကနေ တွေ့ရှိထားတဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် အချက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အရေးအကြောင်းဖြစ်တာ ပိုဆိုး လေလေ အရိုးပွမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလေ ဆိုတာ ပါပဲ။ အရေးအကြောင်းအများစုက အသက်အရွယ် ရလာလို့ ဖြစ်တာ ဖြစ်နိုင်သလို စီးကရက် အသောက်များခြင်း၊ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှုများခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ မျက်လုံး အရောင်က ခါတိုင်းလို အဖြူရောင် မဟုတ်ဘဲ အ၀ါရောင် ပြောင်းသွားရင် အသည်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။
၆။ အလွန်အမင်း အရောင်ဖျော့တော့တဲ့ လက်သည်းတွေက သွေးအားနည်းခြင်း၊ အသည်းရောဂါ၊ အစာအာဟာရ ချို့တဲ့မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်ခုံး ခဏခဏ လှုပ်နေရင် ဘာများဖြစ်မလဲဟု စိတ်ထင့် လာတတ်သည်။ မျက်ကွင်းတွေ ညိုလာပြီဆို တစ်ခုခုများ ဖြစ်တော့မလား စိုးရိမ်ကြသည်။ အအိပ်များသွားလျှင် ကိုယ်လက် မအီမသာတွေ ဖြစ်ပြီး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်း သွားရတာကရော ဘာကြောင့်လဲ။ လူပင်ပန်း လာရင်း ဖြူဖတ်ဖြူရော် ဖြစ်သွားတာ ကရော အသို့နည်း။
ဇတ်ခနဲ ဇတ်ခနဲ မျက်ခုံးလှုပ်တာ ဘာကြောင့်လဲ။
အိပ်ရာနိုးရင် အာပုပ်စော်ဘာကြောင့် နံ။
အိပ်လွန်းရင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်လား။
ပင်ပန်းလာရင် မျက်လုံးတွေ ဘာကြောင့် ရဲလာတာလဲ။
ဖုန်းအဓိက ၀ါဒီတို့ ကြီးစိုးရာ ယနေ့ကမ္ဘာ
စာဖတ်သူဟာ ဖုန်းအဓိက ၀ါဒီလား။ စာဖတ်သူ၏ ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်း/ဇနီးသည်ကရော ဖုန်းအဓိက ၀ါဒီလား။ အမှန်အတိုင်းသာ ဖြေကြကြေးဆိုလျှင် ယနေ့ဖုန်း ကိုင်နေသော လူသား အများစုကြီးကား ဖုန်းအဓိက ၀ါဒီများဟု အဖြေထွက် လာလိမ့်မည်။
ကိုယ့်အတွက် ဦးစားအပေးရဆုံး၊ အချိန်အပေးရဆုံး အရာကို ပြောပါဟုဆိုလျှင် ဖုန်းဟု ရဲရဲဖြေမည့်သူနှင့် မရဲတရဲ ကျိတ်ပြီး ဖြေမည့်သူတို့က အများစုကြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဖုန်းကိုင်နေသော်လည်း ဖုန်း၏လွှမ်းမိုးမှုကို မခံဘဲဖုန်းကို နိုင်နင်းစွာ အသုံးချနိုင်သူက အနည်းစုသာ ရှိလိမ့်မည်။
ဖုန်းအဓိက ၀ါဒီများ၏ အထင်ရှားဆုံး လက္ခဏာမှာ လူကြားသူကြား မိတ်ဆွေများနှင့် စကားပြောနေချိန်မျိုးမှာပင် ဖုန်းထုတ်ကြည့်ဖို့ ၀န်မလေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တစ်ဖက်သားကို အလေးမထားဘဲ ဖုန်းထုတ် ကလိခြင်းသည် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆက်ဆံရေး၊ အလုပ်ခွင်တွင်း ဆက်ဆံရေးမှသည် ချစ်သူချင်း ဆက်ဆံရေး၊ လင်မယားချင်း ဆက်ဆံရေးကိုပါ ကြီးစွာထိခိုက် စေလျက်ရှိကြောင်း Computers in Human Behaviour ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသော လေ့လာမှု စစ်တမ်း တစ်ရပ်ကလည်း ဆိုလိုက်သည်။
ချစ်သူချင်း၊ လင်မယားချင်း စကားပြောဆိုနေချိန်တွင် တစ်ယောက်ယောက်က ဖုန်းကောက်ကိုင်ပြီး ကြည့်နေခြင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးနေခြင်းသည် ကျန်တစ်ယောက်၏ စိတ်တွင် ဟာတာတာ ဖြစ်စေသော အပြုအမူဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဟာတာတာ ဖြစ်ပါများလာလျှင် နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးကို အားမရ မကျေနပ်စိတ် ကြီးထွားလာပြီး ခွာပြဲသည့်အဆင့်သို့ အရောက်မြန်စေကြောင်းလည်း လေ့လာမှု စစ်တမ်းပေါင်းများစွာက တွေ့ရှိထားပြီး ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဖုန်းကမ္ဘာတွင် ထိုသို့ဖုန်းကလိသူက ချစ်သူစုံတွဲ၊ လင်မယားများထဲတွင် တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘဲ နှစ်ယောက်စလုံးက ကလိနေခြင်းမျိုးဖြစ်ရာ ပြဿနာမီးပွားသည် အရှိန်နှစ်ဆ ပိုပြင်းလျက် ရှိတော့သည်။ စာဖတ်သူ အနေဖြင့်လည်း ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်သည်။ မိမိချစ်သူ သို့မဟုတ် ဇနီး၊ ခင်ပွန်းနှင့် စကား ပြောနေစဉ် တစ်ဖက်သားက ဖုန်းကောက် ကလိနေလျှင် ကိုယ့်စိတ်မှာ ဟာတာတာ ဖြစ်သွားရတာကို သတိထားကြည့်လျှင် သိနိုင်သည်။
ဖုန်းအဓိက၀ါဒီ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ချည်း တိုးနေရသူမျိုးသည် သနားစရာ သတ္တ၀ါတစ်မျိုး ဖြစ်၏။ သူ့စိတ်သည် မကြာမကြာ ဟာတာတာ ဖြစ်နေရသဖြင့် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စိတ်ဟာဒဏ်သည် စိတ်ဒဏ်ရာအဖြစ်သို့ ကူးကာ စိတ်ကျဝေဒနာ ခံစားရရှာတော့သည်။
ချစ်သူချင်း၊ လင်မယားချင်း သာမက မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း၊ အလုပ်ခွင်အတွင်း ဆက်ဆံရေးပါမကျန် ဆက်ဆံရေး မှန်သမျှသည် လူလူချင်း အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်း ဖြောင့်ဖြူးနေမှ သာယာ ချောမွေ့စမြဲ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ လူသားတို့သည် လူလူချင်း ဆက်ဆံရေး လမ်းကြောင်းများကို ဖုန်းဟူသော လက်နက်ဖြင့် ဖျက်ဆီးနေကြ၏။ ဖုန်းဟူသော အမိုးအကာအောက်တွင် တစ်ယောက်တည်း ခိုလှုံနေကြ၏။ ဖုန်းအဓိက ၀ါဒီများနဲ့ စကားဝိုင်း ထိုင်မိလျှင် ဖုန်းမှာ ဘာပဲပေါ်လာလာ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောနေသူ ထက်တော့ အရေးကြီးသည်။ ဒါကြောင့် ကောက်ကိုင်ကြည့်မှ ဖြစ်မည်ဟူသော အဓိပ္ပာယ်က မပြောဘဲနှင့် နားလည် ခံစားနေရသည်။ ဖုန်းကနေ သူငယ်ချင်းရှာ၊ ဖုန်းကနေပဲ လမ်းခွဲလိုက်ကြသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆက်ဆံရေး၏ စိန်ခေါ်မှုမျိုးကို ရင်မဆိုင်ချင်တော့။ ဖုန်းဆီမှာသာ ကွန်းခိုရာ ရှာမိနေတော့သည်။
ဖုန်းအဓိက၀ါဒီ အလုပ်ရှင်များ၊ မန်နေဂျာများသည်လည်း မိမိတို့ အလုပ်ကို နစ်မွန်းသထက် နစ်မွန်းအောင် လုပ်သူများဟု လေ့လာမှု စစ်တမ်းများက ဆိုထားသည်။
လုပ်ငန်းကိစ္စ ပြောနေတုန်းမှာတောင် အလုပ်ရှင်က ကျွန်တော်တို့ကို သေချာဂရုစိုက် မပြောဘူး။ ဖုန်းပဲ တတို့တို့လုပ်ရင်း ပြောချင်တာ ပြောနေတယ်။
ကျုပ်တို့ မန်နေဂျာကြီးလည်း အလုပ်ကိစ္စ ပြောနေတုန်း တန်းလန်းကြီး ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင်ပြီး ပျောက်သွား လိုက်တာ ကျန်တဲ့လူတွေ ငုတ်တုတ် ထိုင်စောင့်လိုက်ရတယ် ဟူသော ၀န်ထမ်းများ၏ စကားများသည် ဖုန်းအဓိက ၀ါဒီတို့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စည်းချက်ညီမှု ပျက်စီးနေရသည့် ပြယုဂ်များ ဖြစ်၏။
အမေရိကန် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း (၂၀၀) ကို သဘောထား စစ်တမ်း ကောက်ကြည့်ရာ ဖုန်းချည်း ကလိနေပြီး ၀န်ထမ်းများနဲ့ စကားဖြောင့်ဖြောင့်တောင် မပြောနိုင်သော မန်နေဂျာမျိုးကို စိတ်အကုန်ဆုံး၊ မယုံကြည်ဆုံးဟု ဆိုကြသည်။ မန်နေဂျာအပေါ် စိတ်ပျက်နေသော ၀န်ထမ်းများသည် အလုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း အားအပြည့် စိုက်ထုတ်ချင်စိတ် မရှိတော့သဖြင့် လုပ်ငန်းသည် မသိမသာနှင့် နစ်မွန်းရတော့သည်။
ဖုန်းနဲ့ အချိန်ကုန်နေတတ်သည့် မန်နေဂျာမျိုး၊ စကားပြောနေတုန်းမှာတောင် ဖုန်းကလိရင်း စိတ်မပါသလို နားထောင်နေသော မန်နေဂျာမျိုးထံတွင် လုပ်ရသော ၀န်ထမ်းများသည် စိတ်ဟာခြင်း ဒဏ်ကြောင့် ထိုအဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ရေး လုပ်ပေးချင်စိတ်လည်း လျော့ကျသလို၊ အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဂုဏ်ယူသော စိတ်မျိုးလည်း ပွန်းပဲ့ရကြောင်း လုပ်ငန်းခွင် စိတ်ပညာလေ့လာမှု စစ်တမ်းများကလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ဖုန်းအဓိက၀ါဒီ အလုပ်ရှင်များ၊ မန်နေဂျာများ လက်အောက်မှာ လုပ်နေရသော ၀န်ထမ်းများသည် ကိုယ့်အလုပ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ် အမှတ်ပေးရာတွင်လည်း ခပ်နိမ့်နိမ့်သာ ပေးတတ်ကြကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဖုန်းကို ဒုတိယ အဆင့်သာ ထားပြီး ၀န်ထမ်းများကို ပထမအဆင့်ထားသော အလုပ်ရှင်မျိုး၊ မန်နေဂျာမျိုး လက်အောက်တွင် လုပ်ရသူများမှာ ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုယ် အကဲဖြတ်စေသည့်အခါ အမှတ်မြင့်မြင့် ပေးတတ်ကြကြောင်း တွေ့ရသည်။
သဘောတရားက ရှင်းသည်။ လူသည် မိမိကို ဂရုစိုက်သူကိုသာ ပြန်ဂရုစိုက်လိုသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြော နေပါလျက် ဖုန်းထုတ် ကလိနေသူ၊ ဖုန်းဝင်လာတိုင်း ကောက်ကိုင်ကာ ဖုန်းပြောနေသူမျိုးသည် တစ်ဖက်သားကို ဂရုမစိုက်၊ အလေးမထားသူသာ ဖြစ်၏။ ထိုသူမျိုးကို တစ်ဖက်သားက ပြန်ပြီးဂရုစိုက် ချစ်ခင်နေဖို့ မလွယ်။ ယနေ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ အခြေခံသည် လူလူချင်း တကယ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု နှောင်ကြိုးများဖြင့် ဖွဲ့တည်ထားခြင်း ဖြစ်၏။ ဖုန်းပေါ်မှ ဆက်ဆံရေးများသည် အပေါ်ယံ ပင့်ကူမျှင် ဖွဲ့တည်မှုမျိုးသာ ဖြစ်၏။ ထိုပင့်ကူမျှင် ဖွဲ့တည်မှုမျိုးသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်မြဲရေးအတွက် တကယ်တမ်း ထိန်းသိမ်း ပေးထားနိုင်သည့် အင်အားမျိုးမရှိ။ သို့ဖြစ်ရာ အဓိကအခြေခံ လူလူချင်း ဆက်ဆံရေးနှင့် အပေါ်ယံ ပင့်ကူမျှင် ဆက်ဆံရေးကို ခွဲခြားတတ်မှ အရည်အသွေးပြည့် လူမှုဘ၀ တည်ဆောက်နိုင်ကြမည်။
အိပ်ခန်းထဲပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ခန်းထဲပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းအသုံးပြုမှု လျှော့ကြဖို့တော့ လိုမည်။ ယနေ့လူသား အများစုကြီးကား လိုတာထက်ပိုပြီး ဖုန်းစွဲနေကြသည်။ စမတ်ဖုန်းများသည် ခိုင်းတတ်လျှင် လွန်စွာအကျိုးရှိသော ပစ္စည်းများ ဖြစ်၏။ ထိုအချက်ကို သံသယ ဖြစ်စရာမလို။ နည်းပညာ တိုးတက်မှုကို တားဆီးရန် အကြောင်းမရှိ။ သို့သော် စမတ်ဖုန်းများသည် လူကိုကူညီသလို၊ လူကိုအကျဉ်းကျအောင်လည်း လုပ်တတ်၏။ ဖုန်းကိုင်သူ အများစုကြီးသည် စမတ်ဖုန်း အကျဉ်းသားများ ဖြစ်နေကြသည် မဟုတ်လား။
သို့သော် စမတ်ဖုန်းများတွင် အပြစ်မရှိ။ သုံးသူ၏ ခံယူချက်နှင့် ရပ်တည်ချက် အပေါ်သာ မူတည်သည်။ စမတ်ဖုန်း၏ ကျေးကျွန် ဖြစ်နေရသော လူများစုကြီးထဲ စိမ့်ဝင်မည်လား၊ စမတ်ဖုန်းကို ကျွန်ပြု ခိုင်းစေနိုင်သော လူနည်းစုဘက်သို့ စိမ့်ဝင်မည်လား တစ်ခုတော့ ရွေးကြရလိမ့်မည်။
Ref: Opinion: Smartphones wreak havoc on relationships (CNN)
ကလေးများကို အမှန်တကယ် ရင်ဖွင့်အောင် ပြုလုပ်နည်းများ
Saturday, October 10, 2015 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
ကလေးများကို သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ရင်ဖွင့်စေချင်ရင် ၊
ကလေးများ သင့်ကို သူတို့ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက် ကလေးတွေကို ပြောပြစေချင်ရင်၊
အောက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်ကြရအောင်… အနည်းဆုံးတော့ သင့်နဲ့ သင့်ကလေး ဆက်ဆံရေး တော်တော် အဆင်ပြေသွား ပါလိမ့်မယ်။
၁။ ချီးကျူးစရာ အကြောင်းအရာ ပေါ်ပေါက်လာရင် ရက်ရက်ရောရော ချီးကျူးပေးပါ။ ချီးကျူးရတဲ့ အကြောင်းအရာများကို သင်ကလေးအား သေသေချာချာ ရှင်းပြပါ။ ချီးကျူးသင့် ချီးကျူးထိုက်တယ်လို့ ကလေးခံစားမိပါစေ။ ချီးကျူးတဲ့ အကြောင်းအရာအားလုံး အမှန်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
၂။ ကလေးကို အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲ၊ လက်တွေ့မှာ သူငယ်ချင်လိုမြင်ကြည့်ပြီး ပေါင်းကြည့်ပါ။
သူငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပေါင်းရင် ဆုံးမတာတွေ နည်းသွားပြီး တိုင်ပင်တာတွေများသွားတယ်။
၃။ ပုခုန်းလေးကို ပုပ်လိုက်၊ ခေါင်းကလေးကိုကိုင်လိုက်၊ မျက်နာကလေးကိုပွတ်လိုက်၊ အခွင့်အခါ ကြုံတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။ အပြုအမူဟာ စကားလုံးထက် ပိုမိုထိရောက်တတ်ပါတယ်။
၄။ ကိစ္စတစ်ခုခု (သို့) အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခု အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ မိမိရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကလေးနဲ့ တိုင်ပင်သလိုလိုနဲ့ ပြောပြပါ။
၅။ “ငါမင်းကိုစေတနာနဲ့ ပြောနေတာ၊ မင်း ဒါတော့ ဒီလိုလုပ်သင့်တယ် ” ဆိုတဲ့ စကားပြော လေသံမျိုးကို လုံးဝရှောင်ကြင်ပါ။ မင်းအတွက် မင်းလုပ်နေတယ်။ မင်းအလုပ် မင်းပြီးအောင်လုပ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုး သက်ရောက်အောင် ပြောကြားရင် ပိုမိုထိရောက်တတ်ပါတယ်။
၆။ ငါမင်းအဖေပဲ၊ ငါပြောတဲ့အတိုင်း မင်းလုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့လေသံမျိုး ရှောင်ကြင်ပါ။ မိဘဟာ ကလေးရဲ့ စံပြပါ။ မိဘလုပ်သလို ကလေးတွေလိုက်ပြုမူတတ်ပါတယ်။
၇။ ကလေးတွေ မပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆဲဆိုတာမျိုး၊ ရိုက်နက်ပြီး အတင်းပြောခိုင်းတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဖိနိပ်ခြင်းဟာ အာခံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပဲရှိတယ်။ ကလေးတွေ အမှန်မပြောပြတာဟာ ကိုယ်မေးတဲ့ပုံစံက မမှန်သေးလို့ပါ။ဒီကိစ္စကို ခဏလပ်ထားလိုက်ပါ။ လေးငါးရက်လောက်ကျရင် မသိမသာနဲ့ ပြန်ချော့မေးကြည့်ပါ။ ကလေးရဲ့စိတ်အကာအကွယ် တော်တော်ရော့သွားတာ တွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။
၈။ ခေတ်ကြီးဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်နေပါစေ၊ ကလေးတွေကို စာရေးကြည့်ပါ။ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ပိုမိုထိရောက်တာကို သင်တွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။ အထူသဖြင့် တစ်ခုခု အပြစ်တင်တာ မှားသွားလို့၊ စကားပြောတာ လိုအပ်တာထက် ပိုပြီးပြောမိတဲ့ အခါမျိုး ကျရင်၊ ကိုယ်စိတ်မကောင်းတာတွေ၊ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာတွေ ကို စာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးသားလို့ ရပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကို စမ်းစစ်တဲ့အခါမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကို ဖေါ်ပြချင်တဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောလို့မထွက်တဲ့ စကားတွေကို စာရေးရင် ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။
၉။ ကလေးနဲ့ တူညီတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို အတူကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကြာမကြာ ပြုလုပ်ပေးရင်၊ မိသားစုအတွင်းမှာ စကားလက်ဆုံကျဖို့ အခွင့်ကောင်းပိုမိုရရှိစေတတ်ပါတယ်။
၁၀။ ကလေးအပေါ် မကျေမနပ်နဲ့ မညည်းညူ ပါနဲ့။ ညည်းညူခြင်းဟာ မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ ကာဆီးတဲ့ တံတိုင်းကြီးသဖွယ် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပညာရှင်မဟုတ်ပါ။ မိဘကောင်းဖြစ်ချင်တော့ စာအုပ်ရှာဖတ်ပါတယ်။ ကောင်းတာတွေတွေ့တော့ ရှယ်ရာလုပ်ချင်လာပါတယ်။ ဖတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ထဲက ဟိုနားနည်းနည်း ဒီနားနည်းနည်းနဲ့ ဘာသာပြန်တာက များပါတယ်။ မိဘများ ဖတ်ကြည့်ရင် အကျိုးမဖြစ်ရင်တောင်မှ အကျိုးမယုတ်စေအောင် သတိထားပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ နစ်သက်နိုင်ကြပါစေ။
မိမိကလေးတွေကို လူတစ်လုံး သူတစ်လုံး ဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်ဖို့ ဘာတွေက ပိုပြီး အရေးကြီးပါသလဲ။ စာတော်တယ်။ လိမ္မာတယ်။ မိဘစကား နားထောင်တယ်။ သိတတ်တယ်။ ဒါတွေ လုံလောက်ပြီလား။
ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိခြင်းဟာ စကားနားထောင်တာထက် ပိုမိုအရေးကြီးပါတယ်။
၀ါသနာရှိခြင်းဟာ စာမေးပွဲ ရမှတ်ကောင်းခြင်းထက်ပိုမိုအရေးကြီးပါတယ်။
စိတ်ရင်းခံကောင်းခြင်းဟာ မှားခြင်းမှန်ခြင်းထက်ပိုမို အရေးကြီးပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မူ ခံစားတတ်ခြင်းဟာ ပြည့်စုံခြင်းထက် ပိုမို အရေးကြီးတတ်ပါတယ်။
ယုံကြည်ခြင်းဟာ ရှိခိုးဦးချခြင်းထက် ပိုမိုအရေးကြီးပါတယ်။
ရင့်ကျက်လာခြင်းဟာ အနိုင်အရူံးထက် ပိုမို အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကို စမ်းစစ်တတ်ခြင်းဟာ သူများကို အကဲခတ် ဝေဖန်တတ်ခြင်း ထက် ပိုမို အရေးကြီးပါတယ်။
အမြန်ခေတ် ကုန်တော့မည့်သူများ (သို့) အမြန် out သွားမည့်သူများ၊ သင်ပါဝင်နေပြီလား
၁။ ၈နာရီ အပြင် သင်ယူလေ့လာမူ မရှိသောလူ
လူလူချင်းရဲ့ ကွာခြားချက်ဆိုတာ အားလပ်တဲ့ အချိန်ကို ဘယ်လို အသုံးချသလဲ အပေါ် မူတည်တယ်လို့ ဖတ်မှတ်လေ့လာဖူးပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ လူများကို လေ့လာကြည့်ရင် အချိန်ပိုနေသူများ၊ ပျင်ရိငြီးငွေ့နေ သူများ မဟုတ်ကြပဲ အချိန်ကို ညစ်ထုတ်နေသူများ၊ ကြိုးစားပြီး လေ့လာနေသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အားလပ်ချိန်လေးကိုလုပြီး ဘာမှမလေ့လာပဲ နေရင်တော့ အမြန် out သွားနိုင်ပါတယ်။
၂။ အသစ်အဆန်းအပေါ် တုန့်ပြန်မူ နောင်နှေးသောလူ
အသစ်အဆန်း မှန်သမျှ သံသယ ကြားထဲကနေ၊ ဆန့်ကျင်တဲ့ အသံတွေကြားထဲကနေ ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းတွေဟာလည်း စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း များစွာ လိုက်ပါလာတတ်ပါတယ်။ ခေတ်ကြီးကို အမီလိုက်နိုင်တဲ့လူ၊ ကြိုမြင်နိုင်တဲ့ လူများအဖို့ အသစ်အဆန်းအားလုံး ဟာ အခွင့်အရေးတွေကြီးကြီးပါ။ အသစ်အဆန်းကို ငြင်းဆန်နေရင်တော့ အမြန် out သွားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကာလာအိုကေ ကို မနှစ်သက်သူ၊ Smart ဖုန်းကို သုံးဖို့ ငြင်းဆန်တဲ့လူ စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲပဲ ရုန်းကန်တတ်တဲ့လူ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလောကမှာ ၁ + ၁ ဟာ ၂ ထက်ကြီးပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ အသင်းအဖွဲ့ ရုန်းကန်ရတဲ့ ခေတ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ၁+၁ = ၂ ဆိုတာ သင်ချာင်္ ပညာရပ်ပါ။ ၁ + ၁ = ၁၁ ဆိုတာ စီးပွားရေး ပညာပါ။
ကိစ္စကြီးတာ ငယ်တာ အရေးမကြီးပါ။ သင်ရဲ့ တုန့်ပြန်မူ၊ သင်ရဲ့ အမြင် ဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကိစ္စကြီးတာ ငယ်တာ သင်ကို မထိခိုက်နိုင်ပါ။ သင် ထိုကိစ္စ အပေါ် တုန့်ပြန်မူ ဟာ သင့်ကို ဒုက္ခ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
၅။ အမြင်ကျဉ်း အမြင်တိုသောလူ
မျက်စိရှေ့ က သေးသေးမျဉ်မျဉ် လေးတွေကို အလေးထားလွန်းရင်၊ တွက်ကပ်လွန်းနေရင် ရေရှည်မှာ အကျိုးအမြတ်ကြီးကြီး ဆုံးရူံးတတ်ပါတယ်။ အလုပ်ကို ကောင်းမွန်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးပမ်းလုပ်မယ်။ အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ဘေးထွက်ရလဒ်လို့ ယူဆနိုင်ရင် အလုပ်တော်တော် များများ အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ကောင်းကျိုးထက် တွယ်ဝိုက်ပြီး ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေဟာ ပိုမို အောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်။
၆။ ဆက်ဆံရေး အားနည်းသူများ
စိတ်ဆိုးလွယ်တဲ့လူ၊ စိတ်ပြောင်းမြန်တဲ့လူ၊ ဒေါသကြီး စိတ်ကြီးတဲ့လူများ ဟာ ဆက်ဆံရေး အားနည်းတတ်ကြပါတယ်။ သုတေသန အရ အရည်အချင်းရှိတယ။် သောတလည်းကြီးတဲ့လူများဟာ အရည်အချင်းကို သုံးဖို့ အခွင့်အရေး ပျောက်ဆုံးနေတတ်ပါတယ်။ သောတစိတ်ကို ထိမ်းသိမ်းနိုင်ပြီး ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တဲ့လူ များဟာ သူများထက် ပိုမို အောင်မြင်လွယ်ကြပါတယ်။
ရ။ အတွေးအခေါ် ခေတ်မမီတော့တဲ့ လူများ
အတွေးအခေါ် ခေတ်မီဖို့ အမြဲ လေ့လာ ဆည်းပူးနေဖို့ လိုပါတယ်။ အတွေးအခေါ် ခေတ်မမီ တော့ရင် စီးပွားရေး ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားအလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ အဆင်မပြေလှပါ။
ထူးချွန်တဲ့ ကလေးတွေကို ဒီလိုပျိုးထောင်ကြပါတယ်
၁။ နေ့တိုင်း အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့် အချိန်ယူပြီး သင့်ကလေးနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
၆။ ကလေးအပြစ်တစ်ခုခု လုပ်မိရင် လေးလေးနက်နက် သဘောထားပြီး ရှင်းပြပါ။ ဆုံးမပါ။
ရ။ မိဘဆိုပြီးတော့မှ အမြဲတမ်း မျက်နာကြီး တည်မနေပါနှင့်၊ ကလေးတွေနဲ့ အတူ ရယ်မောနိုင်ပါစေ။ရယ်မောသံဟာ ကလေးတွေကို သူတို့ဘ၀ကို ပိုမို နှစ်သက်စေပါတယ်။
အပြုသဘော ပိုဆောင်ပါတယ်။ဘယ်အရာမဆို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ကြည့်မြင်တတ်တဲ့ အကျင့် ရှိသွားစေတတ်ပါတယ်။
၈။ ကလေးတွေကို ပုံ ပြင်ပြောပြတဲ့အခါ စိတ်ရှည်ပါ။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမဲ့ ပုံပြင်ကို ရွေးဖတ်ပြပါ။
၉။ ကိုယ်ဘ၀မှာ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ကလေးအပေါ် ပုံမလွှဲပြောင်းပါနဲ့၊ မပုံချပါနဲ့
၁၀။ ကလေးရဲ့ အခြေအနေမှန်အပေါ် မူတည်ပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကလေးရဲ့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမူ တစ်ခုခု ကို စဉ်းစား အကြံအဥာဏ်ထုတ်ကြည့်ပါ။
၁၁။ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကလေးများကို သူတို့ အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ အချိန်အကြာကြီး မထားပါနှင့်၊ သားမှာအချစ်၊ မြေးမှာ အနှစ်၊ အနှစ်လွန်သွားရင် ကလေးကို လမ်းမှန်ပြန်ရောက်အောင် ပြန်ခေါ်ဆောင်ရတာ ခက်ခဲတတ်တယ်။ သုတေသန အရ မျိုးဆက်ကျော် ပျိုးထောင်မူ ဟာ ကလေးကို ထိခိုက်တတ်တဲ့ သာဓကတွေ အများကြီး တွေ့ရှိနေပါပြီ။
၁၂။ ကလေးများကို ပြုံးတတ်အောင် ငယ်စဉ်ကစပြီး သင်ကြားပေးထားပါ။
၁၃။ ကလေးများကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဟိုဟာဝယ်ပေးမယ်။ ဒီခေါ်လည်မယ်လို့ ကတိပေးမလွယ်ပါနှင့်၊ ကတိပေးခဲ့ရင် ကတိကို ရအောင်အကောင်အထည်ဖေါ်ပါ။
၁၄။ မိဘများအနေနဲ့ နေရာလဲလည်ပြီး စဉ်းစားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါစေ၊ ငါသူတို့အရွယ်တုန်းကကောဘယ်လို အနေအထားမျိုး ရှိပါသလဲ၊
၁၅။ အခြားကလေးထက် ညံ့တယ်၊ အခြားကလေးကို ဘယ်နေရာမှာ မမှီဘူး လို့ ဘယ်တော့မှ မပြောမိစေနဲ့
၁၆။ ကလေးကို ချီးကျူးဖို့ အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုး ကို ရှာဖွေပါ။ ရက်ရက်ရောရော အသိအမှတ်ပြုပါ။ ချီးကျူးပါ။
၁၇။ ကလေးကို ဘယ်တော့အခါမှ မခြိမ်းခြောက်ပါနှင့်၊ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေး ပုံပြင်များဖြင့် အခြိမ်းခြောက်ပါနှင့်
၁၈။ ကလေးကို လူရှေ့သူရှေ့တွင် မဆဲဆိုမိပါစေနှင့်၊ မလှောင်ပြောင်မိ ပါစေနှင့်၊ ကလေး ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်ချက် ပျောက်ဆုံးသွားတတ်တယ်။
ကလေးပျိုးထောင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မရေးဖြစ်တာတောင် အချိန်အတော်ကြာနေပါပြီ။ အဓိက ကတော့ ရေးစရာ အချက်အလက်တွေ ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ အပ်ကြောင်းထပ်လာလို့ပါ။ အမှန်တော့ ဘယ်နိုင်ငံပဲ ကြည့်ကြည့် ကလေးတွေ ပျိုးထောင်တဲ့ အခြေခံ အယူအဆတွေ သိပ် အကွာခြားကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ ကုန်ဆုံးအောင် ဖတ်ရူ့သူ မိဘများအားလုံးကို အစဉ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အသုံးဝင် အကျိုး ပြု နိုင်ပါစေ။
ရွှေချဉ်ပေါင်၏ ကျန်းမာရေး လျို့ဝှက်ချက်များ
Saturday, October 10, 2015 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
ချဉ်ပေါင်ရွက်ကို ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ ဟင်းချို၊ ချဉ်ရည်ဟင်း...စသည့် ထမင်းမြိန်ဟင်းလျာများအဖြစ် စားေ လ့ရှိကြပါတယ်။ အသား ထူတဲ့ အနီရောင်ချဉ်ပေါင်ဖူးတို့ ကို ကြော်၍သော်လည်းကောင်း၊ ချဉ်ရည် ဟင်းအဖြစ်ပါ ချက်စားနိုင်ပါတယ်။ တချို့ အရပ်ဒေသ များမှာ အရွက်ရင့်ရင့်၊ အပွင့်နှင့် အသီးတို့ကို နေပူပူတွင် အခြောက်လှန်းပြီး လက်ဖက်ရည်ကြမ်း လုပ်သောက်ကြပါတယ်။ ချဉ် ပေါင်ဖူး နှင့် ချဉ်ပေါင်ပွင့်တို့ ကို ထန်းလျက်(သို့ မဟုတ်)သကြား ဖြင့်ယိုထိုး၍သော်လည်းကောင်း၊ အနောက်နိုင် ငံများတွင် Jam၊ သကြားရည်အနှစ်၊ ရှာလကာရည် စသည်ဖြင့် စားသုံးကြပါတယ်။ ချဉ်ပေါင်ဖူးယိုက အနံ့ အရသာပိုစူးတာကြောင့်၊ ၄င်းကို ဇီးယို ထက်ပို၍ လူကြိုက်များကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသီးရင့်ရင့် ကို သကြား၊ ဆားအနည်းငယ်တို့ ဖြင့်ရောကြိုပြီး ဆူလာပါက အအေးခံ ၍ ဖျော်ရည်အဖြစ်သောက်သုံး နိုင်ပါတယ်။
(၃) Vitamin C နှင့် သတ္တုဓာတ်တို့အမြောက်အ များပါရှိသောကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်း မွန်ြ ခင်း၊ ဆဲလ်များသေဆုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ သွားဖုံးနှင့် သွားတို့ ကို ကျန်း မာစေခြင်း၊ free radicals အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အရွယ်ကိုနုပျိုစေခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေ အ လား အလာ နည်းပါးစေနိုင်ခြင်း၊ အဆုတ်ကိုကျန်းမာစေခြင်း၊ အအေးပတ်ခြင်း၊ ရာသီပေါ်နှာစေး ချောင်းဆိုး ကူးစက်ရောဂါများနှင့် နှာရည် ယိုနှာပိတ်ခြင်းတို့ မှလဲ ကာကွယ်ပေးခြင်း...စသည်ဖြင့် ကောင်းကျိုးပြုပါ တယ်။
Written by ကြည်လွင်မြင့် (မုဒြာ)
သွေးတိုးရောဂါဖြစ်သူ တစ်နေ့တခြား တိုးပွားလာနေသည်။ မြန်မာလူမျိုးများသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးနိုင်ငံဖြစ်၍ သဘာဝဆန်နှင့် အသီးအနှံကိုအဓိကထား စားသုံးသူများဖြစ်သဖြင့် သွေးတိုးရောဂါဟူ သည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅၀ ကခေတ်မစားသေးပေ။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဖွင့်ပေးပြီး ၂၆ နှစ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ အစားအသောက်များနှင့် ဆေးဝါးမျိုးစုံ ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်တွင် သွေးတိုး ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ ချက်ချင်းပင်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
သွေးတိုးရောဂါသည် အငန်တစ်ခုတည်းရှောင်ရုံဖြင့် ပြီးသည့်ရောဂါဟုအချို့က ထင်နေကြသည်။ အဆီတိုးခြင်းသည် သွေးတိုး၏မူလအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်ကို သတိမထားမိကြပေ။ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတနည်းပါးကြသဖြင့် သွေးတိုးရောဂါကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သွေးများတိုးပွားလာသည့်ရောဂါဟု ထင်နေသူများလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သွေးတိုးရောဂါသည် လူဝပြီးသွေးများတိုးပွားလာခြင်းမဟုတ် ပါ။ သွေးကို နှလုံးကတွန်းပို့သည့် ဖိအားတိုးလာခြင်း၊ သွေးကြောများကို သွေးပို့သည့်အားမြင့်တက်ပြီး သွေးကြောများက မခံနိုင်ဖြစ်လာခြင်းသာဖြစ်သည်။ လူပိန်သည်ဖြစ်စေ၊ ဝသည်ဖြစ်စေ သွေးဖိအားတိုး လာလျှင် သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။
ရှေးက မြန်မာဆရာကြီးများသည် ဘယ်ဘက်လက်ကောက်ဝတ်၊ လက်မအရင်းရှိသွေးကြောကို လက် ညှိုး၊ လက်ခလယ်၊ လက်သူကြွယ်သုံးချောင်းဖြင့် ထောက်စမ်းသည်။ သွေးစမ်းနည်းမှာ ပထမဖွဖွလေး စမ်းရသည်။ ထို့နောက် ဖိပြီးစမ်းရသည်။ ထို့နောက်နေရာအနည်းငယ်ရွှေ့ပြီး ထပ်မံစမ်းရပြန်သည်။ သွေးလုံးအမိဆုံးနေရာတွင် ရပ်တန့်ပြီးနောက် သွေးလုံးအနေအထားကို ကြည့်သည်။ ဤနည်းကို (ဖွ-ဖိ-ရွှေ့-မိ) နည်းဖြင့် သွေးစမ်းသည်ဟုခေါ်သည်။
လက်ကောက်ဝတ်၊ လက်မအရင်းတွင် စမ်းမိထားသော သွေးလုံးသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သွေးလုံး ကြီး ခြင်း၊ သေးခြင်းမရှိ၊ စည်းချက်မှန်မှန်ဖြင့် သွားနေလျှင် သွေးတိုးခြင်းမရှိပေ။ သွေးကျခြင်းလည်းမရှိပေ။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ သွေးလုံးပွခြင်း၊ ကြီးခြင်း၊ မြွေ၊ ငါးရှဉ့်ကဲ့သို့တိုးခြင်း၊ ဖားကဲ့သို့ခုန်ခြင်း၊ ကလေးသူငယ် တွင် ပုစွန်ဆိတ်ကဲ့သို့ ခုန်ခြင်းများစမ်းမိလျှင် မကောင်းသောသွေးတိုးဖြစ်သည်။
သွေးတိုးရောဂါရှိသူများ၏ သွေးတိုးမှာ ဝသောသူတွင် သွေးလုံးကြီး၍ပွကာ ဆောင့်၍တိုးသည်။ ဘောလုံးကိုရေတွင်နှစ်လိုက်ပြီး လက်လွှတ်လိုက်သောအခါ အပေါ်သို့ဆောင့်တက်ပြီး ပြန်ပေါ်လာသ ကဲ့သို့ ငုပ်ချည်ပေါ်ချည်စမ်းမိသည်။ ပိန်သောသူတွင် စမ်းမိသောသွေးတိုးပုံမှာ သွေးလုံးသေးပြီး စူးခနဲ ဆောင့်တိုးသည်။ မြွေတိုးသကဲ့သို့ ငရှဉ့်တိုးသကဲ့သို့ တိုးသည်။ ရေတွင်ဝါးလုံးကို မျှောချသကဲ့သို့ အလျားလိုက်ဆောင့်တိုးသည်။ သွေးတိုးရောဂါမရှိသူများသည် သွေးပေါင်ချိန်ကိရိယာမရှိပါက မိမိ လက်ကောက်ဝတ်ကို မိမိဘာသာစမ်းသပ်သည့်အလေ့အကျင့်ကို ပြုထားသင့်သည်။
အသက်လေးဆယ်ကျော်လာလျှင် လူပိုဝလာလျှင် အဆီအဆိမ့်များကို လျှော့စားသင့်သည်။ ဆေး ပညာသဘောနှင့်ပြောရလျှင် အချိုကြိုက်လွန်းလျှင်လည်း ပထဝီဓာတ်နှင့် အာပေါဓာတ်တိုးပြီး ဝလာ နိုင်သည်။ ဝလာခြင်းသည် သွေးတိုးရောဂါ၏ အခြေခံဖြစ်သည်။ သွေးကြောများအတွင်း အဆီစုမလာ အောင် လမ်းများများလျှောက်ပေးဖို့လိုသည်။ လမ်းလျှောက်ခြင်းက အကျိုးများစွာရှိသည်။
(၁) အကြောအခြင်များကို လျော့စေသည်။
(၂) နှလုံးမှတွန်းပို့သော သွေးသည် လမ်းလျှောက်သောအခါ အောက်သို့ ခြေဖျားအထိရောက် အောင် စီးဆင်းနိုင်သည်။
(၃) သွေးကြောအတွင်းမှ ပိတ်ဆို့မှုများကို ပွင့်စေနိုင်သည်။
(၄) လှုပ်ရှားမှုကြောင့် သွေးကြောများကျယ်ပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေသည်။
(၅) လှုပ်ရှားမှုကြောင့် စုခဲနေသော အဆီဓာတ်များ လောင်ကျွမ်းပျော်ဝင်သွားနိုင်သည်။
(၆) သွေးကြောနံရံတွင် ကပ်နေသော အဆီများလည်း ပျော်ဝင်သွားနိုင်သည်။
(၇) ကိုယ်အလေးချိန်ဖိအားသည် ခြေသလုံးနှစ်ဖက်နှင့် ခြေဖဝါးများပေါ်သို့ သက်ရောက်ခြင်း ကြောင့် ကြွက်သားအင်အား ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်။
(၈) သွေးကြောပိတ်၍ ကြွက်တက်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်နိုင်သည်။
(၉) ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ခြင်းကြောင့် မျှတသောခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ရရှိနိုင်သည်။
အနောက်တိုင်း ဆေးပညာတွင် လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် သွေးအတွင်းမှ မကောင်းသောကိုလက်စထ ရောကို လျှော့ချနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကိုလက်စထရောတွင် ကောင်းသောကိုလက်စထရောနှင့် မကောင်းသောကိုလက်စထရောဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ကိုလက်စထရောတက်သည်ဆိုသည်မှာ သွေး ကြောများကို ကျဉ်းစေနုိုင်သည့် မကောင်းသောကိုလက်စထရောတက်ခြင်းကိုဆိုသည်။ ကောင်းသော ကိုလက်စထရောသည် လူ၏သက်စောင့်ဓာတ်ဖြစ်သဖြင့် များလျှင်ကောင်းသည်။ လမ်းလျှောက်သော အခါခွန်အားဖြုန်းတီးပြီး ဓာတ်လောင်ကျွမ်းစေသဖြင့် မကောင်းသောကိုလက်စထရောများ လျော့ကျ သွားသည်။ ဆေးမစားဘဲ အဆီကိုလျော့ကျစေသောနည်းဖြစ်သည်။
ဆင်းရဲသားနှင့် ချမ်းသာသူ နှိုင်းယှဉ်လျှင် ချမ်းသာသူများတွင် သွေးတိုးရောဂါပိုဖြစ်ရခြင်းမှာ အချို့၊ အဆိမ့်၊ အအီ အစားအစာများခြင်း အကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပေ။ အေးသောနေရာ၊ အဲ ကွန်းအအေးဓာတ်လွှတ်ထားသည့် ဇိမ်နှင့်နေနိုင်သော အခန်းများတွင် နေထိုင်အိပ်စက်ခြင်း၊ အချိန် ကြာမြင့်စွာ မလှုပ်မရှားနေထိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း သွေးတွင်းအဆီဓာတ်တိုးလာနိုင်သည်။ ချမ်းသာသူ များသည် လမ်းလျှောက်နည်းခြင်းကြောင့် သွားလေရာဇိမ်ခံကားများဖြင့် သွားလာခြင်းကြောင့် အဆီ များအနည်ထိုင်ပြီး သွေးတိုးရောဂါဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
သွေးတိုးရောဂါသည် တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမားဖြစ်သည်ဟုဆိုရခြင်းမှာ လူဝလာတိုင်း သွေးတိုး သည့် လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာမပြဘဲ ပုံမှန်အတိုင်းစားကောင်း၊ အိပ်ပျော်ရှိနေတတ်သည်။ အမှတ်မ ထင်စိတ်လှုပ်ရှားသောအခါ ပူပန်မှုသောက ကြုံတွေ့လာသောအခါနှင့် အပူမှအအေး၊ အအေးမှအပူ ရုတ်ခြည်းပြောင်းလဲသောအခါများတွင် ရုတ်တရက်မူးဝေပြီး သွေးတိုးလက္ခဏာပြလာတတ်သည်။ အဆီတိုး၍ ကျဉ်းနေသော သွေးကြောများသည် နှလုံးမှစိတ်လှုပ်ရှား၍ ပိုညှစ်သောအခါ သွေးမသွား သဖြင့် သွေးကြောပေါက်ထွက်ပြီး ဦးနှောက်အတွင်း သွေးယိုစီးခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာတွင် အဆီဓာတ်တိုးခြင်းကို ပထဝီ၊ အာပေါ အာဗန္ဓန ရောဂါဟုခေါ်သည်။ ပိတ်ဆုိ့ခြင်းဖြစ်သည့်ရောဂါဖြစ်သဖြင့် အာကာသရပြီး ချွေးထွက်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ လမ်း များများလျှောက်ပြီး ဝမ်းမှန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်သည်။ ပထဝီ၊ အာပေါစာဖြစ်သောအသား နှင့်အဆီကို လျှော့စားသုံးရမည်။ အချဉ်နှင့်အစပ်ကို ပို၍စားသုံးရမည်။ ယိုစီးအာပေါဓာတ်ဖြစ်သောရေ ကိုများများသောက်ပေးရန်လိုသည်။ အလွယ်ဆုံးပြောရလျှင် အဆီ၊ အသားဓာတ်ကိုရှောင်ပြီး အသီး အနှံကို များများစားပေးဖို့လိုပါသည်။
သွေးတိုးရောဂါအစ အဆီတိုးခြင်းက၊ အဆီတိုးခြင်းအစ လမ်းမလျှောက်ခြင်းကဟု ဆိုနိုင်သည်။ အစား အသောက်ကောင်းကောင်း စားနိုင်ပါသည်။ စားသည်နှင့်ညီမျှအောင် လမ်းများများလျှောက်ပေးခြင်း ဖြင့် သွေးတိုးရောဂါဘေးမှ ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ။
သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ဝက်ခြံများက ပြောပြသော သင့်ကျန်းမာရေးအကြောင်း
မျက်နှာပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ ဝက်ခြံကိုကြည့်ပြီး အရေပြားဆရာဝန်တွေက လူနာရဲ့ရောဂါကို ဟော ကိန်းထုတ်ကြသလို တရုတ်တိုင်းရင်းသမားတော်တွေကလည်း မျက်နှာအသားအရေနဲ့ ဝက်ခြံကိုကြည့် ၍ဆေးကုသရာ ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါ ‘Face Mapping’ ကုသနည်းလေးပါတဲ့။ ဒီ ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ရှုရင်း မျက်နှာပေါ်ကဝက်ခြံအနေအထားကိုကြည့်ပြီး မိမိကျန်းမာရေးအခြေအ နေကို တစေ့တစောင်းအကဲခတ်ပြီး ဝေဒနာကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ကြဖို့ အောက်ပါအတိုင်း မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
(၁) နဖူးပြင်ပေါ်က ဝက်ခြံများ
ဆီးအိမ်နဲ့ အစာချေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပါပြီ။ ဒါ့ပြင် အစာမကြေခြင်း၊ ရေဓာတ် မလုံလောက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆိပ်အတောက်များခြင်းတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဲဒီ နေရာတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို ဝက်ခြံပေါက်ခဲ့ရင် ရေများများသောက်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစား အစာတွေ ပိုစားပေးရပါမယ်။ (ဆေးသုတေသီတွေရဲ့ အဆိုအမိန့်များအရ အမျိုးသမီးတွေ အများဆုံး ပေါက်လေ့ရှိတဲ့နေရာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့)
(၂) မျက်ခုံးမွေးနှစ်ခုအလယ်ကောင်တည့်တည့်က ဝက်ခြံများ
၎င်းနေရာကို T-Zone လို့ခေါ်ပါတယ်။ အသည်းရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်း ကိုထိခိုက်စေမယ့် အရက်သေစာအမျိုးမျိုး၊ ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများ၊ သကြား၊ နို့မလိုင်၊ နို့ ထောပတ်၊ ဆီကြော်မုန့်တွေကို လျှော့စားပေးရပါမယ်။
(၃) နားရွက်တွေကို စစ်ဆေးပါ
နားရွက်နှစ်ဖက်စလုံးကလည်း ဘယ်/ညာကျောက်ကပ်တွေနဲ့ ဆက်နွှယ်မှုရှိနေကြပါတယ်။ အကယ်၍ နားရွက်နှစ်ဖက်စလုံးနီပြီး ပူထူနေတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေများလာပြီမို့ ရေသန့် များများသောက်ပေးရပါမယ်။ အရက်၊ ဆော်ဒါတွေအပြင် ကဖိန်းဓာတ်များပြားတဲ့ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ကိုလာအချိုရည်တို့ကို လျှော့သောက်ပေးရပါမယ်။ နားတွေကလည်း ကျောက်ကပ်နဲ့ချိတ် ဆက်နေတာမို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့အခါ နားပေါ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်လာတတ်ပါ တယ်။ အဲဒီအခါ အငန်(ဆား) လျှော့စားပြီး ရေများများသောက်ပေးပါ။
(၄) ပါးပေါ်က ဝက်ခြံများ
(က) အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့တဲ့ဝေဒနာရှင်တွေ၊ allergies ဖြစ်သူတွေ၊ အသက်ရှူလမ်း ကြောင်းတစ်လျှောက် ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများ ပျက်စီးနေသူတွေနဲ့ ဆေးလိပ်စွဲသူတွေမှာ ပါးရဲ့အ ပေါ်ဘက်မှာ ဝက်ခြံပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ (ခ) ပါးရဲ့အောက်ဘက်မှာ ဝက်ခြံပေါက်နေသူများက သွား ဖုံးရောင်ဝေဒနာနဲ့ ဆက်စပ်မရှိနေပြီမို့ သွားဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့လိုပါတယ်။ (ဂ) ပါးပြင်မှာ ဝက်ခြံပေါက်စေတဲ့ တခြားနည်းလမ်းများလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဖုန်းဟန်းဆက်တွေကို မျက်နှာနဲ့ဖိကပ်ပြီး ပြောတာ တွေ၊ ခေါင်းအုံး၊ စောင်တွေသန့်ရှင်းမှုအားနည်းတာတွေ၊ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး သွားပုံမှန်တိုက်တာတွေ ကြောင့်ပါပဲ။
(၅) နှာခေါင်းပေါ်က ဝက်ခြံများ
နှာခေါင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နှာတံတစ်လျှောက် ဝက်ခြံတွေက နှလုံးရောဂါနဲ့သွေးတိုးရောဂါတွေဖြစ်တာကို ညွှန်ပြပါတယ်။ သွေးဖိအားပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့အတွက် အားဖြည့်အချိုရည်များ၊ အငန်များကိုလျှော့စားပြီး သစ်သီးနဲ့ဟင်းရွက်တွေကို ပိုစားပေးပါ။ လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းဆိုး ဆေး၊ အိုင်းလိုင်နာတွေနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့အခါ နှာခေါင်းရဲ့အောက်ခြေ(သို့)အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့ အထက် ပိုင်းမှာဝက်ခြံထွက်လာတတ်လို့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးနောက်တစ်မျိုးကို ပြောင်းလဲဆိုးပေးသင့်ပါတယ်။
(၆) မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ပေါ်က ဝက်ခြံများ
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာသည်များက နားထင်နဲ့မျက်လုံးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ ဝက်ခြံထွက်လေ့ရှိကြပါ တယ်။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် မျက်ကွင်းညိုသူများကို မဆိုလိုပေမယ့် ရံဖန်ရံခါ (သို့) မကြာခဏ မျက်ကွင်း ညိုတတ်သူများဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနေတာကို ဖော်ပြနေတာကြောင့် ရေများများ သောက်ရင်း၊ အရည်ရွှမ်းတဲ့သစ်သီးတွေစားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
(၇) မေးစေ့ပေါ်က ဝက်ခြံများ
ရှေးဆိုရိုးစကားပုံလေးကတော့ ‘မေးဖျားထက်မှာ ဝက်ခြံပေါက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမရှိရာ’ တဲ့။ အဲဒီနေ ရာမှာ ဝက်ခြံပေါက်တဲ့အခါ တခြားနေရာတွေထက်ပိုပြီး နာကျင်စွာခံရတတ်သလို အညှော်မိတဲ့အခါမှာ လည်း ငန်းမန်းဝင်လွယ်ပါတယ်။ မေးစေ့နဲ့မေးဖျားတစ်ဝိုက်ရှိ ဝက်ခြံများက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဟော်မုန်း တွေဖောက်ပြန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပြီး ဓမ္မတာရာသီလာခါနီးကာလတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီး မှုများတဲ့သူတွေမှာ ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ပြင်ဝမ်းချုပ်သူတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအပူအပုပ်များသူတွေ လည်းမေးစေ့ပေါ်မှာ ဝက်ခြံပေါက်တတ်တာမို့ အမျှင်ဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေ များများစားပေး သင့်ပါတယ်။ျ
(၈) အောက်နှုတ်ခမ်း (သွားရည်စီးကြောင်းတစ်လျှောက်) နှင့် မေးရိုးပေါ်က ဝက်ခြံများ
ဟော်မုန်းမညီမျှသူတွေမှာလည်း အဲဒီလိုနေရာတွေမှာ ဝက်ခြံပေါက်တတ်ပြီး၊ သွားပိုးစားသူတွေ၊ ခံတွင်းပုပ်သူတွေ၊ ခံတွင်းရောဂါအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေတာဖြစ်လို့ မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။ နီးစပ်ရာသွား ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူသင့်ပါပြီ။
(၉) လည်ပင်းတွေ နီးမြန်းနေခြင်း
အအေးမိ၊ နှာစေး စတဲ့ရာသီဖျားနာတုပ်ကွေးပိုးတွေ ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ လည်ပင်းတွေနီမြန်းလာတတ် ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေစားရင်း ကောင်းကောင်းအနားယူပါ။ နေပူထဲလုံးဝမထွက်ဘဲ ရေများများသောက်ဖို့လည်း (အထူး) လိုအပ်ပါတယ်။
(ကိုကား- Face Mapping@Acne Focus on Faces)
အတွဲ(၁၁)၊ အမှတ် (၃၆)၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇-၂၃၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
Saturday, October 10, 2015 Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ
Lenovo A536 ကို Lastest Firmware တောင်းထားတဲ့အကိုအတွက်
ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်နေတဲ့အကိုရေ အောက်ကလင့်ကနေ
Download ရယူလိုက်ပါ။ size ကတော့ 943.2MB ရှိပါတယ်။ Flashtool လေးပါတင်ပေး
Lenovo A536 Firmware >>> https://cloud.mail.ru/public/79ff40f6b0b2/A536_S147_140910_ROW.rar
SP Flashtool >>> http://lenovo-forums.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=44090
Samsung Galaxy Mega 6.3 LTE ( GT-I9205 ) Lastest Firmware
Samsung Galaxy Mega 6.3 LTE အတွက် Lastest Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လိုအပ်လို့တောင်းထားတဲ့အကို နဲ့ အတူအခြား လိုအပ်သူများလဲ ရယူနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်တာလေးတွေရယူရင်း Firmware တင်နည်းလေးပါလေ့လာ လိုက်ပါ။
Firmware Package >>> http://d-h.st/dsu
Odin >>> https://drive.google.com/file/d/0B2JXIgO_oxW8VkhyeENRYnByRms/edit?pli=1
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ Odin က PDA ဆိုတဲ့နေရာမှာ Firmware ဖိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Odin မှာ PASS ပြပြီး
ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Firmware တင်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။
တယ်လီနောကဒ်မှာ ငွေမရှိလည်း Facebook အခမဲ့ သုံးနည်း
Saturday, October 10, 2015 Tips & Tricks
တယ်လီနော ဆင်းကဒ် သုံးတဲ့အခါ ဖုန်းဘေလ် မရှိလည်း Facebook အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ယင်းကဲ့သို့ အသုံးပြုဖို့အတွက် ဖုန်းထဲမှာ Opera Mini Browser ကို Download ဆွဲထားဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Opera Mini Browser ရှိပြီဆိုရင် m.facebook.com ကိုဝင်ပြီးတော့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပုံတွေ၊ စာတွေ၊ ဗီဒီယီုတွေကြည့်နိုင် မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Downlaod လည်း အခမဲ့ ဆွဲလို့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိနစ် ၂၀ ထက် ကျော်တဲ့ ဗီဒီယိုဆိုရင် ငွေဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘေလ်မရှိရင်တော့ မရပါဘူး။ Telnor ကဒ် သုံးရင် Opera Mini Browser ဖြစ်ဖြစ်ဘယ် Browser ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် 0.facebook.com ကို အသုံးပြုရင်တော့ အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆီကနေ ဆိုရင်ောတ့ ပုံတွေကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် status တွေကို မြင့်ရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Mini Browser ကို အသုံးပြုပြီး m.facebook.com ကို ဝင်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဘေလ်မကုန်ပဲ Facebook အသုံးပြုနိုင်အောင် Opera နဲ့ Telenor တို့ သဘောတူညီချက်ယူပြီး ဖန်တီးပေးထားတဲ့ အစီစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Opera Mini ကနေဆိုရင်လည်း wikipedia ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အခမဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဘေလ်မကုန်ပဲ သုံးချင်သူများအတွက် နည်းလမ်း မျှဝေပေးလိုက်ရ ပါတယ်။
Lenovo A2010 ကို Root လုပ်ဖို့ Root Tool လေးနှစ်ခုကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်က Root Tool လေးနှစ်ခုကို Download ရယူပြီး Root လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။
Root လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်ကိုအရင် Download ရယူလိုက်ပါ။
Download Here >>> http://up.media1fire.com/8f85d1fo2bxp ( Kingo Root )
Download Here >>> http://up.media1fire.com/xedvhuidpuuv# ( One Click Root )
Download ရယူလို့ရလာတဲ့ rar file ထဲက .exe ကို Run
လိုက်ပါ။Root Tool ကို install လုပ်ခိုင်းပါမယ်။ install လုပ်လိုက်ပါ။ install ပြီးရင်တော့
ဖုန်းကို USB Debugging တို့ Unknow Source တို့ on ပြီး Normal mode ကနေပဲ USB ကြိုး
ချိတ်ဆက်ပြီး ROOT လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Root ANY Android Device 4.2.2, 4.3, 4.4 , 5.0, 5.0.2 , 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2 Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop One Click…….
Huawei G700-T00 အတွက် B124 Flashtool Firmware
Huawei G700-T00 အတွက် Firmware တောင်းထားလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှာလို့တွေ့တဲ့လင့်က အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။
ကျတော် လင့်နှစ်ခုနဲ့တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာလင့်ကနေ Download ရယူလိုက်ပါ။
Dev-Host.com >>> http://d-h.st/xMh
Google Drive >>> https://drive.google.com/file/d/0B9otGooNOcQBbGF2eDVzMkhOUG8/view?pli=1
Huawei G730-C00 IMEI Error Fix
Huawei G730-C00 ကို IMEI Error ဖြစ်လို့အကူအညီတောင်းထားတဲ့
အကိုနဲ့အတူ လိုအပ်သူများအားလုံးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖြေရှင်းနည်းလေးကတော့ လွယ်ကူပါတယ်။ .bat file လေးနဲ့ အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။
ဒီလိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ဖန်တီးပေးထားသူကတော့ ကိုပိာန်းမောင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး IMEI Error ကိုဖြေရှင်းရန် File ကို Download ရယူလိုက်ပါ။
Download Here >>> G730-C00 IMEI Error FIX File
အရင်ဦးဆုံး IMEI Error ဖြစ်သွားတဲ့ဖုန်းကို ROOT ဖောက်လိုက်ပါ။
IMEI Error ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ဖုန်းမှာ ROOT Accept ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ROOT လုပ်ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို USB Debugging တို့ Unknow Source တို့
on ပြီး Normal mode နဲ့ပဲ USB ကြိုးထိုးပြီး PC နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
Download ရယူထားတဲ့ IMEI Error FIx File ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ bat file ကခိုင်းတဲ့
အတိုင်းလေးသာ လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးဖုန်းမှာ Reboot ကျပြီး
Power ပြန်တက်လာရင်တော့ IMEI လေးပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Credit >>> Ko Hein Maung ( IMEI Error Fix File Owner )
Saturday, October 10, 2015 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
ဖေ့စ်ဘွတ်(Facebook)ပေါ်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ Friend list ထဲက မိတ်ဆွေတွေ ထံကပဲဖြစ်ဖြစ်… ကျနော် တို့နဲ့အတူ facebook groups တွေမှာ members ၀င်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တဦးဦး ထံကပဲဖြစ်ဖြစ် အမြင် မတော်တဲ့ Porn videos တွေ (မရည်ရွယ်ပဲ) အလို အလျောက် တက်လာနေတာကို သတိ ထားမိကြ မှာပါ…
တခါတရံမှာ ကျနော်တို့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ… မိသားစုဝင်တွေ ဆီကနေ ဒီလို အမြင်မတော်တဲ့ porn videos လင့်ခ်တွေ ပို့လာတာကို မြင်ရတော့ တအံ့တသြ ဖြစ်ကြ ရပါတယ်…
သူတို့အနေနဲ့ ဒီပို့စ်တွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပို့နေတာမဟုတ်သလို သူတို့ကို အပြစ်တင်လို့လည်း မရ ပါဘူး… သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတောင် မသိကြပါ.. သနားစရာကောင်းတာကတော့ သူတို့အနေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရပြီး ဟက်ကာ(Hackers) တွေရဲ့ အသုံးချတာကို ခံနေရတဲ့ သားကောင်းတွေ ဖြစ်နေ ကြလို့ပါ…
ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ အခုနောက်ဆုံးပေါ် Trojan Virus ဟာ browser extensions တွေအဖြစ် တည်ရှိနေပြီး users တွေ စိတ်ဝင်စားအောင် အတုအယောင် porn video links ပုံစံတွေကို အသုံးပြုကာ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ပြန့်နှံ့နေတာပါ…. ကူးစက်ခံရတဲ့ users တွေရဲ့ account နာမည်တွေကို အသုံးပြုပြီး tags တွေ ပြန်ပွားကာ facebook groups… နဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ facebook walls တွေမှာ ပျံနှံ့နေတာပါ… အထူးသဖြင့် Post Approval ကို Tick မလုပ်ထားတဲ့ facebook groups တွေမှာ ပိုပြီးတွေ့နေရပါတယ်…
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရ ပုံကတော… ဖေ့စ်ဘွတ် user တစ်ဦးထံ (အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံနေရတဲ့သူ) အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးထံကနေ အမြင်မတော်တဲ့ porn video လင့်ခ် တခုက သူ့ရဲ့ wall မှာ တက်လာတယ် ဆိုပါစို့… အင်တာနက် လုံခြုံရေးကို မသိသေးတဲ့ စောစောက user က မစဉ်းစားပဲ လင့်ခ်ကို click လုပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်… ဒါဆိုရင် porn video ကို ကြည့်ဖို့အတွက် Falsh player update လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး flash player update ကို link နဲ့တကွ install လုပ်ခိုင်းတဲ့ နေ ရာရောက်သွားပါမယ်… အဲဒီ လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီး flash player update ကို install လုပ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဟက်ကာတွေရဲ့ သားကောင် ဖြစ်သွားပါပြီ… သူတို့အလိုကျ အသုံးချတာကို ခံရပါတော့မယ်… Trojan ဗိုင်းရပ်စ်တွေက flash player update အယောင်ဆောင် ထားတာပါ… (ကွန်ပြူတာထဲမှာ Flash player update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.adobe.com ဆိုတဲ့ official site ရှိပါတယ်… အဲဒီမှာသာ သွားလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…)
တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို လူဦးရေ သန်းနဲ့ချီပြီးတော့ သုံးနေကြတာပါ… ကျနော်တို့ အသုံးပြုနေ တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် အ၀န်းအ၀ိုင်းလောက်မှာတင် တနေ့တနေ့ တက်လာနေတဲ့ porn လင့်ခ်တွေက မနည်းပါ… facebook group တွေမှာ member ၀င်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ Group admin တွေ ပိုသိကြမှာပါ… ဒါတောင် group အတော်များများမှာ member တွေတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တိုင်းကို Admin က ခွင့်ပြုမှ group ပေါ်ရောက်မဲ့ Post Approval နေရာမှာ အမှန်ခြစ်(Tick) လုပ်ထားပေးကြလို့ပါ… နို့မဟုတ် ရင်တော့… တကမ္ဘာလုံးမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Users ဦးရေနဲ့သာ တွက်ကြည့်ပါ… တရက်တရက်ကို pron လင့်ခ်တွေ နည်းမှာ မဟုတ်သလို ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်းကလည်း မသေးလှပါ…
လတ်တလော ပေါ်ဖြူလာဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေ… ဒါမှမဟုတ်… လူတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာတွေ… လိုအပ်ချက် တခုအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမဲ့ အရာတွေကို ဗန်းပြပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ Target ကို ရောက်အောင် သွေးဆောင်ဖြားယောင်တာဟာ ဟက်ကာ (Hackers) တွေရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တခုပါ… TI နယ်ပယ်မှာဆိုရင်လည်း အိုင်တီကို စပြီးလေ့လာနေတဲ့ လူငယ်တွေဟာ သူတို့အနေနဲ့ ဟက်ကာတွေရဲ့ သားကောင်းဘ၀ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားတတ် ကြပါတယ်… လူငယ်တွေ စိတ်ဝင်စားအောင် ဟန်ဆောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဟက်ကာတွေရဲ့ applications တိုင်းကို ကွန်ပြူတာထဲကို Download လုပ် လုပ်ပြီး install လုပ်နေကြလို့ပါ…
ဆက်ရအောင်… အင်တာနက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Mohammad Faghani ရဲ့ အဆိုအရ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပုထုဇဉ်တွေ စိတ်ဝင်စားအောင် porn videos တွေလို အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ Trojan ဗိုင်းရပ်စ်တွေ စပေါ်လာပြီး ၂ ရက်အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေဟာ ၁၁၀,၀၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်… ယနေ့အထိလောက်သာ ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ဗျာ… ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်းက ကြောက်ခမန်း လိလိပါ…
ဒီ Trojan ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးသလဲဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူရဲ့ account ကို သုံးပြီး porn video လင့်ခ်တွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဖြန့်တဲ့အခါ အဆိုပါ ကူးစက်ခံရသူရဲ့ friend list ထဲမှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ ၂၀ ကျော်လောက်ကိုပါ အလိုအလျောက် tags တွေ လုပ်သွားပါတယ်… အဲဒါကြောင့် porn video တွေ တက်လာတဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ facebook account နာမည်တွေကို tags လုပ်ထားတာကို ရံဖန်ရံခါ တွေ့ဖူးကြမှာပါ… (ပို့စ်လုပ်တဲ့သူကို ဘာဖြစ်လို့ ငါ့နာမည် tags လုပ်ရတာလဲ ဆိုပြီးတော့ သွားတော့ မဆဲလိုက်ပါနဲ့… သူခမျာ ဘာမှ မသိလိုက်ရှာပါဘူး… :-) :-) …)
ဒါပေမဲ့… အခု trojan ဗိုင်းရပ်စ်က user တယောက်ကို ကူးစက်ပြီးဆိုရင် စောစောက ပြောသလို သူ့ friend list ထဲမှာရှိတဲ့ friends ၂၀ ကျော်လောက်ကို tags တွေ auto လိုက်လုပ်ပစ်လိုက်တာပါ… အယောက် (၁၀၀, ၁၀၀၀, ၁၀၀၀၀, ၁၀၀၀၀၀… etc..) လောက် ကူးစက်ပြီးဆိုရင် သူလုပ်မဲ့ tags အရေအတွက်ကိုသာ စဉ်းစား ကြည့်ပေတော့… ဒီနည်းနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပိုပြီး ပြန့်နှံ့ လာတာပါ… ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီဆိုရင် ကွန်ပြူတာတွေ၊ အင်တာနက်တွေ သုံးရင် ပုံမှန်မဟုတ် တာတွေ ဖြစ်လာမယ်… အထူးသတိပေးချက်ကတော့ ဒီ trojan ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ user ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ကီးဘုတ်နဲ့ မောက်စ် လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဟက်ကာ(hackers)တွေက ထိန်ချုပ်ခွင့် ရသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ…
အကြံပြုချင်တာက… ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဦးထံက Porn videos လင့်ခ်(Links) တွေ မိမိဖေ့စ်ဘွတ် wall ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်… မိမိ member ၀င်ထားတဲ့ group ထဲမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်… တွေ့မိရင် အလောတကြီးနဲ့ (Click) မနှိပ်မိပါစေနဲ့… မိမိကိုပါ ကူးစက်သွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်… သေချာတာကတော့ ဒီလိုမျိုး လင့်ခ်တွေ ပို့လာပြီဆိုကတည်းက ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ ကွန်ပြူတာဟာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရပြီးဆိုတာ သေချာနေပါပြီ… အဲဒါကြောင့် links တွေပို့လာတဲ့ account ပိုင်ရှင်ကို ၄င်းကွန်းပြူတာမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေကြောင်း အကြောင်းကြားပေးပါ… report လုပ်ပေးပါ… ကွန်ပြူတာကို ဗိုင်းရပ်စ် scan လုပ်ဖို့ အကြံပေးပါ… နီးစပ်ရာ နည်းပညာ နားလည် သူတွေထံမှာ အကြံဥာဏ် ရယူဖို့ တိုက်တွန်းပါ… အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ Trojan ဗိုင်းရပ်စ် (Virus) တွေပါ…
Facebook group ကို open post လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ group admin တွေကို အကြံပြုချင်ပါတယ်… group setting ထဲမှာသွားပြီး Post Approval ဘေးက "All group posts must be approved by an admin" ဆိုတဲ့နေရာမှာ အမှန်ခြစ်(Tick) လုပ်ထားပေးသင့်ပါတယ်… member တွေ တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တွေကို တခုချင်း စိစစ်ပြီး group ပေါ် ပြန်တင်ပေးရတဲ့အတွက် နည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်ကောင်း ရှုပ်ပါလိမ့်မယ်… နောက်ပြီး group တခုမှာ အနည်းဆုံး admin ၂ ယောက်လောက်တော့ ရှိသင့်ပါ တယ်ဗျာ… အကြံပေးတာပါ…
ကိုယ်ပိုင်ဖေ့စ်ဘွတ် account သုံးနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အနေနဲ့လည်း မလိုလားအပ်တဲ့ posts တွေ… မသင့်တော်တဲ့ posts တွေမှာ မိမိ account ကို tags လုပ်လို့ မရအောင်… ဒါမှမဟုတ်… မိမိကို tags လုပ်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို timeline ပေါ် ရောက်သင့်၊ မရောက်သင့် ပြန်ပြီး Review လုပ်လို့ ရအောင် ဖေ့စ်ဘွတ် ညာဘက်ထောင့် အပေါ်က မျှားနေရာက Setting ကိုသွား… ပြီးရင် Timeline and Tagging Setting နေရာမှာ အောက်ဘက်က “Review tags people add to your own posts before the tags appear on Facebook?” နေရာမှာနှိပ်ပါ... ပြီးရင် “Review posts friends tag you in before they appear on your timeline” နေရာမှာ Enabled လုပ်ထားလိုက်ပါ… ဒါဆိုရင် ဖေ့စ်ဘွတ်မိတ်ဆွေတွေက မိမိကို tags လုပ်လာရင် facebook timeline ပေါ်မရောက်ခင် review လုပ်နိုင်မှာပါ…
တခါတရံ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကိုယ်တိုင်က ဗိုင်းရပ်စ် သတ်ပေးတဲ့ Virus removal tool တခုအနေနဲ့ ဟန်ဆောင် တတ်ပါတယ်… အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေကို “သင့်ကွန်ပြူတာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရတယ်” ဆိုပြီး ချောက်လှန့်က ဟိုလင်ခ့်ကိုနှိပ်ပါ… ဒီလင့်ခ်ကို နှိပ်ပါဆိုပြီး သူတို့ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို ဆွဲခေါ်သွားတတ်ပါတယ်… ဒါလည်း သတိပြုစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား…
-Smartphone တွေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ အင်တာနက် အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်လည်း Lookout, Kaspersky စတဲ့ anti-virus တွေကို ဖုန်းထဲမှာ သွင်းထားသင့်ပါတယ်…
ကလေးငယ်တစ်ဦး စပျစ်သီး လည်ပင်းထဲ ဆို့နင်ပြီး သေဆုံ...
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အောင်မြင်မှုရစေတဲ့ သော့ချက်တစ်ချ...
ကလေးများကို အမှန်တကယ် ရင်ဖွင့်အောင် ပြုလုပ်နည်းမျာ...
အမြန်ခေတ် ကုန်တော့မည့်သူများ (သို့) အမြန် out သွား...
တယ်လီနောကဒ်မှာ ငွေမရှိလည်း Facebook အခမဲ့ သုံးနည်း...